YEYINTNGE(CANADA): Thursday, July 02
အင်္ဂါနေ့၊ 30 ဇွန်လ 2009 စိုင်းအောင်
စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများချယ်လှယ်ကြီးစိုးနေသည့် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ဗမာပြည်နေရာအနှံ့အပြား၌မှောင်ခို စနစ်လွန်စွာတိုးတက် ထွန်းကားလျှက်ရှိသည်။
ယနေ့ဗမာပြည်တွင် လူ့ဘဝဇတ်ခုံပေါ်၌ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသူ လူအယောက် (၁ဝဝ) လျှင် (ဂဝ)က နည်းမျိုးစုံဖြင့် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းနှင့် ပါတ်သက်စီးပွားရှာနေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် မှောင်ခိုစီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်နေသူတိုင်းတော့ အဆိုပါလောကတွင်းသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက် လှုပ်ရှားနိူင်ကြတာတော့ မဟုတ်ပါ သူ့အတာနဲ့သူ့အထွာ ကွာခြားချက်များကရှိသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့ပြီး အမှောင်လွှမ်းနေသည့် ဗမာပြည်တွင် အာဏာပိုင်များရဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို အလူးအလဲခံခဲ့ရကာ မြေအောက်တရားမဝင် လောကထဲ မရောက်ချင်ပဲ ဝင်ရောက်ခဲ့ရသူများလည်း တစ်ပုံတစ် ပင် ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးသည်။
ဒီအထဲတွင် တချို့သော ကုန်သယ်ကြီးများက အစပထမ၌ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးဆိုသလို ရိုးသားစွာ ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားကုန်ကူးနေရင်းက အာဏာပိုင်များရဲ့ ဖိနိပ်ရမ်းကားမှု့များကြောင့် မြေအောက်လမ်းကြောင်းသို့ ပြောင်း ရွေ့သွားရသူများဖြစ်သည်။
တချို့မှာတော့ ငွေကြေးအမြောက်အမြား ဆုံးရူံးခဲ့ရသည့်အပြင်သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပြည်ပြေးဘဝသို့ရောက်ရှိသွား သည်အထိ နစ်နာခဲ့ရသူများလည်း ရှိသည်။
ယခုလို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့သဖြင့် ဘဝပျက်ခဲ့ရသူပေါင်းမြောက်များစွာရှိသည့်အနက် သာရကတစ်ကိုပဲ ကြည့်ပါ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ထဲပါဝင်တဲ့ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးဟာဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဥပဒေချိုးဖေါက်မှုမရှိပါပဲ အာဏာပိုင် များက ၄င်းတို့အာဏာကို ထိပါးလာသည်ဟု ယူဆလာသဖြင့် ထောင်ဒဏ် စီရင်လိုက်သဖြင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ဝရမ်းပြေးဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားရခြင်းဖြစ်သည်။
“အဖြစ်အပျက်က ဒီလို ဒါကတော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြဘူးတဲ့စကားကို အကျဉ်းမျှတင်ပြလိုက်ခြင်းပါ ”
၂ဝဝ၆ခုနှစ်အတွင်းက မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် တရားမဝင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အထည်အလိပ်များကို ရံပုံငွေအ လို့ငှာ လေလံတင်ရောင်းချရာမှာ ရန်ကုန်မှကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးဟာ အဆိုပါ လေလံအထည်အလိပ်များကို ကျပ်သိန်း (၂ဝဝဝ) ကျော်ဖိုး လေလံဆွဲဝယ်ယူရရှိလိုက်တာပါ။
လေလံဆွဲပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ စာချုပ်များ ခွင့်ပြုချက်များကိုလည်း တိုင်းမှူး လက်မှတ်နဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားပါသည်။
ဒါနဲ့ကုန်သည်ကြီးဟာ လေလံပစ္စည်းများကို သူလေလံဆွဲတဲ့မြို့ကနေ မန္တလေးသို့ ရေကြောင်းအတိုင်း သင်္ဘော ကြီးဖြင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်မရှိပဲ သယ်ဆောင်သွားသည်။
မန္တလေးဆိပ်ကမ်းဆိုက်ကပ်သည့်အခါ သူသယ်ဆောင်သွားသည့် အထည်အလိပ်များအား အကောက်အခွန် လဝက စသည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်တော့သည်။
ထိုအခါ ကုန်သည်က သူ့တွင်ပါလာသမျှ စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ပြသော်လည်း အကောက်အခွန်အရာရှိ ဆိုသူက သူ့ဦးလေးအရွယ်ခန့်ရှိသည့် ကုန်သည်ကို “မင်းတိုင်ချင်တဲ့ နေရာသွားတိုင် ဒါတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပဲ အကုန်ဖမ်းတယ် ဆိုကာ ခါးထောက်ပြီး မောက်မောက်မာမာ ပြောဆိုလွှတ်လိုက်တယ် ” လို့ သူကပြောပြသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်းရံပုံငွေအတွက် ဒီပစ္စည်းတွေကို လေလံဆွဲခဲ့တာပါလို့ အထောက်အထားနှင့် ရှင်းပြသော်လည်း မည်သို့မှပြောဆိုမရတော့ပဲ သူ့ကို တရားမဝင်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုဖြင့် ရုံးတင်တရားစွဲလေသောအခါ ကုန်သယ် သည် မိမိပစ္စည်းပြန်မရသည့်အပြင် ထောင်နန်းစံရန် ကိန်းပါဆိုက်ရောက်လာတော့သည်။
နောက်ဆုံး၌ ကြံရာမရတော့သည့်အတွက် မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူးထံ အပြေးအလွှား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကာ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြသောအခါ တိုင်းမှူးက ဝန်ကြီးချုပ် အထိတိုင်ကြားရန် ပြောဆိုလိုက်သဖြင့် ကုန်သည်က ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးနှင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနများသို့ လိပ်မူ၍ စာရေးတိုင်ကြားလေသည်။
တိုင်စာပို့ပြီးနောက်ပိုင်း အဆင့်ဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့များပြုလုပ်ကြပြီး ပစ္စည်းဖမ်းဆီးရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်အကောက် အခွန်ဦးစီးမှူး အရာရှိပိုင်းတချို့ကို အလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
ထိုသို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှု့များ ပြုလုပ်လိုက်သော်လည်း အဖမ်းခံထားရသည့် ကျပ်သိန်း (၂ဝဝဝ) ကျော်ဖိုး အထည်အလိပ်များကို တစ်ခုမှပြန်မပေးသည့်အပြင် ဝန်ကြီးဌာနက “ဒီကောင့်ကိုတော့ ရှင်းလိုက်မှဖြစ်မယ် ဒီအတိုင်းဆက်ထားလို့ကတော့ နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေမှာလည်း ငါတို့ကို ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်ဟု ဆိုပြီး အဆိုပါ အမှုဖြင့်ပင် မန္တလေးတရားရုံးက သူ့ကို အဝေးရောက်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်တယ် ” လို့ ပြောသည။
ထိုစဉ်က သူရောက်ရှိနေရာမြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲက သူ့ကိုဖမ်းဆီးရန် ၀ရမ်းစာလက်ခံရရှိခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးလို စိတ်မရှိ၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန်အကြံပေးလိုက်သဖြင့် ကုန်သည်သည် ဘေးလွတ်ရာသို့ပြေး ရင်းဖြင့် သူဌေးဘဝမှ ဝရမ်းပြေးဖြစ်ခဲ့ရသည။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗမာပြည်တွင် သမာအာဇီဝကျကျ လုပ်ကိုင်စားသောက်သူများ ကို အုပ်စိုးသူများက လမ်းမှားရောက်ရှိရန် တွန်းပို့နေသည်ကို တွေ့မြင်နိူင်ပေသည် ဒါကလည်း သူတို့အာဏာနှင့် စားခွက်အတွက်ဆိုလျှင် ဘာမဆိုလက်ရဲဇက်ရဲလုပ်တတ်သည့် အလေ့အထတစ်ခုပင်။
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ နယ်စပ်တလွှားရှိ မှောင်ခိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ကျင်လည်ကျက်စား ခွင့်ရရန် အာဏာရှင်ကြီးများက လုပ်စားခွင့် ဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြင့်ပေးသနားထားသည့် အခွင့်ထူးခံမှောင်ခို အရာရှိ များ လက်သတ် မွေးထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့က လူတွင်ကျယ်လုပ်ခွင့်ရနေကာ မြိုးမြိုးမြက်မြက်ဝါးမြို နေရသည့်အထဲမှ ဝေစုအချို့ကို စစ်အာဏာရှင်အကျိုး စီးပွားအတွက် ပြန်လည်ပေးကြသဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တနည်းနည်းဖြင့် အကျိုးပြုနေသူများဟု ဆိုရပေမည်။
တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပျက်ဆီးကာ ပြည်သူအများဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်တွင် စစ်တပ်ထဲမှ အရာရှိ များကို အခွင့်ထူးများပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့သော နည်းနာများသည် (၁၂) ကြိုးစုန်းကဝေဆရာကြီး ဗမာစစ်အာဏာရှင်များက ၄င်းတို့ရာဇပလင်ဖင်မြဲ စေရန် တမင်တီထွင်ဖန်တီးထားကြသည့် အကွက်များဖြစ်သည်။
ထိုသို့ မြိုးမြိုးမြက်မြက်ဝါးနေရသူများထဲတွင် စစ်တပ် ရဲ လဝက အကောက်အခွန် သစ်တော အစရှိသည့် အဖွဲ့များမှ အရာရှိကြီးများအပြင် တော်လှန်ရေးသမားဇတ်ပျက်ကြီးများလည်း ပါဝင်လေသည်။
သာမန်လက်လုပ်လက်စားကအစ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှ အရာရှိ ကြီး ငယ်မဟူ မှောင်ခိုလောကတွင် ပါဝင်နေ
လျှက်ရှိသောကြောင့် စစ်အာဏာရှင်ယန္တရားကို အလုပ်အကျွေးပြု ပူဇော်နေသကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည်။
မှောင်ခိုလုပ်ငန်းဟူသည် အာဏာပိုင်များနှင့်ပေါင်းစားမှသာ အဆင်ပြေလွယ်ကူတတ်သည့် အနေအထားကြောင့်
ပြည်တွင်းရှိ နိူင်ငံရေးဓါတ်ခံရှိသူများ ဗမာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရွံမုန်းသူများက “လျှာတွင်မျက်ပေါက်ပါစေ ဒီအလုပ်တော့ မည်သည့်အခါမှ မလုပ်ဟု ” ပြောသူများရှိသည်။
အခွင့်ထူးခံ အရာရှိ မှောင်ခိုသမားကြီးများက တဘက်နိုင်ငံမှမှောင်ခိုပစ္စည်းများကို တရားမဝင်တင်သွင်းနေကြသည့် ဒုစရိုက်သမားများဖြစ်လင့်ကစား နိူင်ငံရေးလုပ်သူများကို ဖမ်းဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုတတ် ကြသည်မှာ အင်မတန်စက်ရူပ်စရာကောင်းကြောင်း မှောင်ခိုကားလောကသားတစ်ဦးက ဖေါက်သယ်ချသည်။
“ ထော်လာဂျီကယ်ရီ ရဲမှူးတစ်ယောက်ပေါ့ သူ့ဘေးနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံဖမ်းဆီးထားတဲ့ အကြောင်း ပြောနေတာကြားရုံရှိသေးတယ် ဟေ့ကောင်တွေမင်းတို့က နိုင်ငံရေးသမားလား နိူင်ငံရေးလုပ်ရင် ဖမ်း လိုက်လို့ရတယ်ကွလို့ ခြိမ်းခြောက်တယ် ” လို့ ဆိုသည်။
စစ်တပ်မှ အရာရှိကြီးများက နယ်စပ်မှောင်ခိုလောကအခေါ် ကား ထော်လာဂျီ လေလံစာရွက်ဟုခေါ်သည့်လုပ်စားခွင့် စာရွက်များ ကိုင်ဆောင်ထားသဖြင့် ထော်လာဂျီ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝစ်သောက်ကား အစီးပေါင်းမြောက် များစွာအား နေ့စဉ် နယ်စပ်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းလျှက်ရှိသည်။
လေလံစာရွက်ရရှိထားသူများထဲတွင် နေပြည်တော်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူများအပါအဝင် အနယ်နယ်အရပ်
ရပ်မှ ဗိုလ်ကလေး ဗိုလ်ကြီးပေါင်းများစွာ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေလံစာရွက်မှာ ထီပေါက်သည့်လက်မှတ်ထက်ပင် တန်ဘိုးကြီးလှပြီး သူဌေးဖြစ်သည့်လက်မှတ်
တစ်စောင် ပင်ဖြစ်သည် သူတို့ကလည်း အာဏာရှင်ကြီးများထံမှ အဆိုပါလက်မှတ်အတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ရာ
ချီအကုန်ခံလပ်ထိုး၍ ယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။လက်မှတ်ရရှိထားသည့် မှောင်ခို အရာရှိကြီးများ ကိုယ်တိုင်က ဝစ်သောက်ကား ထော်လာဂျီများ တရားမဝင် ဝယ်ယူတင်သွင်းကြ သလို အခကြေးငွေယူ၍လည်း ကယ်ရီသယ် ပေးကြသည်။
သယ်ဆောင်သွားသည့် ကားများအတွင်းတွင် ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရန်စက်ပစ္စည်း များအား အပို ဆောင်း တင်ဆောင်ကြသဖြင့် ကားနှင့်ကယ်ရီခမှ အမြတ်အပြင် စက်ပစ္စည်းရောင်းရ ငွေများမှပါ နှစ်ထပ်ကွမ်း အမြတ်အစွန်း ရရှိကြလေသည်။
ဗမာစစ်အာဏာရှင်များက မွေးထုတ်ထားသည့် မှောင်ခိုအရာရှိကြီးများက အရှက်သိက္ခာမဲ့စွာ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် လေလံစာရွက်လေးတပြပြဖြင့် ပေးကမ်းစွန့်ကျဲဖြတ်သန်းသွားလာနေသော်လည်း အများအမြင်မှာ ရှက်စရာကောင်းလှ ကြောင်း ထိုလုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးက အခုလိုပြောသည်။
“လမ်းရှိတဲ့နေရာ အကုန်ပေးရတာပေါ့ ဗိုလ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပါတာပဲ ဂိတ်ရောက်ပြီဆိုရင် ယူနီဖေါင်းထုတ်ဝတ် လိုက်ပြန် မံစီရဲစခန်းဂိတ်ရောက်တော့ စခန်းမှူးက ထော်လာဂျီကိုတားတယ် ဗိုလ်ကြီးက ယူနီဖေါင်းလေး ကောက်ဝတ်ပြီး မှ လေလံစာရွက်ထုတ်ပြလိုက်တယ် စာရွက်ကိုဗျာ ပြောင်းပြန်ကြည့်ပြီး ဒါလေလံစာရွက်ပဲ ဘာ လုပ်ရမှာလဲ ကြည့်ကြက်ပြီး လုပ်ကြပါဆိုပြီး ငွေ(၂)သိန်းတောင်းတာ (၃)သောင်းနဲ့တည့်သွားတယ် ” လို့ သူက အတွေ့ အကြုံကို ပြောသည်။
ဆက်ပြီး စစ်တပ်မိသားစုများ တောင်းရမ်းစားသောက်တာ တွေ့မြင်ရသည်မှာ ရယ်စရာကောင်းပုံကို ဆက်ပြောသည်။
“ရွှေကူတပ်က မြို့ပေါ်မှာတံတားလေးတစ်ခုရှိတယ် အဲဒီတံတားကသွားရင် စစ်တပ်ကို ဖြတ်စရာမလိုဘူး ဆို တော့ တပ်ကတံတားကိုချိုးထားလိုက်တယ်ဗျ တံတားကိုဘယ်တော့မှမပြင်ဘူး သူတို့တပ်လမ်းဖြတ်တဲ့ ဆိုင်ကယ် ကားထော် လာဂျီမှန်သမျှကို တပ်ရင်းမှူးကတော်ကိုယ်တိုင် ခရာမှုတ်ပြီးတား ပိုက်ဆံတောင်းနေတာ တပ်သားထွက်ပြေးတဲ့ ကိစ္စကအစ တပ်ရင်းမှူးသမီးက အဖေအဖေ ဟိုကောင် ထွက်ပြေးပြီ ဆိုပြီးဖုန်း ဆက်ပြောတယ် ” လို့ ပြောသည်။
ဒါတွေကတော့ မှောင်ခိုလောက ဆုံရကြုံရပုံတွေကို သူက စိတ်မကောင်းစွာ ပြန်ပြောင်းပြောပြနေခြင်းပါ။
ယခုလို လုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရထားသူများကတော့ ဇနီးမယား နှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်မှာ စိန်တွဲလွဲ ရွေတွဲလွဲနှင့် အငြိမ့်သားဖြစ်နေကြတော့သည်။
အခွင့်ထူးခံ ဗမာစစ်အရာရှိအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိန်တွဲလွဲ ရွှေတွဲလွဲဖြင့် ချမ်းသာကြီးပွားသူများရှိကြသလို တချို့စစ် အရာရှိများ ကတော့ တောတွင်းစည်းစိမ်ကို ယစ်မှုးနေကြတော့သည် ၊၊
တောတွင်းစည်းစိမ်ဆိုတာကတော့ စစ်ဆင်ရေးနှင့်နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တာဝန်ကျသည့် စစ်တပ်များမှ အရာရှိ စစ်သည်များက ၄င်းတို့တာဝန်ယူရသည့် နယ်မြေအတွင်းရှိ သစ်မှောင်ခိုသမားများနှင့် ပူးပေါင်းမိကာ ငွေကြေး လဘ်လာဘအမြောက်အများရရှိကာ ရာမ (ခေါ်) မြင်းဆေးအပါအဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံကို သုံးစွဲနေကြပြီး အနှိပ်ခန်း ဇိမ်ခန်းများမှ အပျော်မယ်လေးများဖြင့် ပျော်ပါးခြင်းများပြုလုပ်ကြတော့သည်။
မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဆိုသည့်စကားက သည်အဖြစ်အပျက်များအတွက် အမှန်ပင်ဖြစ်နေတော့ သည်။
ဗမာစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်စုကတော့ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် ၄င်းတို့ဖန်တီးထားသည့်အကွက်ထဲ
လူတော်တော်များများက ရုန်းမထွက်နိူင်သည်ကို ကြည့်ပြီး ကြိတ်ဝမ်းသာနေမည်ကတော့ အသေအချာပင်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/02/20090အကြံပြုခြင်း
တို့ ကရင် များဒီလို အချိန်ခါမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ စကားပြောကြမှာ လား၊ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးအင်မတန်မှ စိတ်ထိခိုက်မိပါသည်၊
နအဖ လူယုတ်မာ နဲ့ အမျိူးသားသစ္စာဖေါက် တို့ ၏လက်ချက်ဖြင့် အပြစ်သူတွေ သွေးခင်းကြရပြီ
ကရင် အမျိုးသားအပေါင်းတို့ ဒါ ကို သင်င်္ခန်းစာယူကြတော့။ အချိန်နည်းနည်းလေးကျန်သေးတယ်။
ဒီကေဘီအေ(၀ဲပုံ) နှင့် KNLA ကရင့်အမျိူးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ယာပုံ) မဲဆောက်ဆေးရုံတွင် စကားပြောကြပုံ။
၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
မျက်မှောက်ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးရဲ့ အဓိကဆုံချက်ဟာ နအဖစစ်အစိုးရက အတင်းချီတက် နေတဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက်ကို ဆန့်ကျင်သူများနဲ့ ထောက်ခံသူများအကြားက ပဋိပက္ခဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒီဟာကို ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ထောက်ပြရရင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို အကောင်းမြင်သူနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့ ပဋိပက္ခလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချဖို့ ကြိုးပမ်းတာ၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်ကို သက်သေထွက်ခွင့်မပေးတာတို့ကအစ လူတွေ တဖမ်းတည်းဖမ်းနေတာ၊ ရယကရုံးထဲမှာ သေအောင်ရိုက်တာ စတာတွေဟာ ဒီပဋိပက္ခရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တပါတည်းမှာ ပြောသင့်တာက ဒီတလော ပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာလည်း အဲဒီပဋိပက္ခပတ်လည်က မုန်တိုင်းမဟုတ်တောင် လေပွေလေးတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီကာလမှာ ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ထွက်လာတာ၊ အာရုံစိုက်ခံရတာတခုက ဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးသစ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်က သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးသစ်ဆိုတာကို အနက်ဖွင့်ရာမှာ “သူတို့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲတင်းကုပ်ထဲကို ကျနော်တို့ကို ဆွဲခေါ်တော့မယ်။ မြက်ကျွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နဖားကြိုးဆွဲလို့ဖြစ်ဖြစ် ဆွဲခေါ်တော့မယ်” လို့အစချီခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖနဲ့ နီးစပ်တဲ့ “ပညာရှင်” တဦးကတော့ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အာမခံချက်မရှိဘူး။ လာမယ့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေခံဥပဒေအာမခံချက်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်က သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသစ်အတွက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အသံညီဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ညီညွတ်ရေး၊ အတိုက်အခံတွေဘက်က ညီညွတ်ရေးရှိဖို့ လက်တွေ့ကျတယ်လို့ သူထင်တဲ့ နည်းလမ်းတခုကို တင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်က လူတွေကို မကြောက်တရားနဲ့ စွန့်လွှတ်မှုရှိကြဖို့လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စောစောကပြောခဲ့တဲ့ “ပညာရှင်” ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခိုင်းရုံမက ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ အသစ်တက်လာတဲ့ နအဖရဲ့ စစ်အုပ်စုချုပ်ကိုင်မှုအောက်က အစိုးရက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖိနှိပ်တာ၊ အန္တရာယ်ပေးတာတွေ လုပ်လာရင် ဒါဟာ “အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်က ခွင့်မပြုတာမဟုတ်ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ အသွင်းကူးပြောင်းရေး မပီပြင်သေးတာပဲဖြစ်မယ်” ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲလွန် ဖိနှိပ်မှုတွေအတွက်တောင် ကြိုတင် ရှေ့နေလိုက်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ တနည်းပြောရရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုပဲ အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းခွင့်ရှိနေမယ့် နောင်တက်လာမယ့်အစိုးရကို ထင်ရာစိုင်းခွင့်ပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဒီ “ပညာရှင်” ဟာ အဲဒီအင်တာဗျူးမှာ “နိုင်ငံရေးကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ်ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်၊ ဒါကို လုပ်မယ်ရည်စူးရင် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းကို သာမန်အားဖြင့် အသိပေးရန် မလိုသော်လည်းပဲ အခုအချိန်မှာ trust (ယုံကြည်မှု) တည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့ အသိပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အနေနဲ့လည်းပဲ အသွင်းကူးပြောင်းရေးကို အလွယ်တကူ ကူးပြောင်းလို့ရမယ်” လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဒါဟာ အဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကတောင် မတောင်းဆိုဘဲနဲ့ ကိုယ်ကသွားပြီး သွားဖြီးလေးနဲ့ မျက်နှာချိုသွေးဖို့ ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပိုအရေးကြီးတာက စစ်အစိုးရဘက်က ဒီနေ့အထိ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တဲ့လက္ခဏာ ဘာတခုမှမပြသေးဘူးဆိုတဲအချက်ကို ဒီ “ပညာရှင်” တွေ ဘာမှမပြောကြဘဲ တခြားနိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေက စစ်အစိုးရယုံကြည်အောင် လုပ်ပြရမယ်လို့ တောင်းဆိုနေပါတယ်။ စစ်အစိုးရက ယုံအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ စစ်အစိုးရကို၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မဆန့်ကျင်ပါကြောင်း ယုံကြည်အောင်လုပ်ရမှာလား။
သူရဲ့ဒီစကားကိုလည်း ဆက်နားထောင်ကြည့်ပါ။ “ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထိုင်းတပ်မတော်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာဟာ အာဏာ သိမ်းတာမဟုတ်ဘူး၊ အာဏာဖြုတ်တာပဲ။ - - - - ဒါဟာ ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို ဖော်ပြတာပဲ” တဲ့။ ဒီလိုဆိုလိုက်တာဟာ နောင်ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်က ဘာမဆိုဝင်လုပ်နိုင်တယ်။ အာဏာသိမ်းတာလောက်ကတော့ ထမင်းစား ရေသောက်ပဲလို့ စစ်တပ်လုပ်သမျှထောက်ခံဖို့ လမ်းခင်းထားတာမဟုတ်လို့ ဘာများဖြစ်ရအုန်းမှာလဲ။
သူနဲ့တချိန်တည်းလိုလိုပြောခဲ့တဲ့ တခြား “ပညာရှင်” တယောက်နဲ့ သူတို့ချင်း အပြောတူနေကြတဲ့ အချက်တခုလည်း တွေ့ရ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗမာပြည် ပြည်သူလူထုဟာ အသိပညာနိမ့်ကျသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာပေးဖို့ လိုသေးတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီလို အသိပညာတွေရှိမှပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်မဲပေးနိုင်မယ်၊ လူရွေးချယ်နိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့က ပြည်သူလူထုဟာ သူတို့ရွေးချယ်မယ့်ပါတီ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်ကို သူ့ပေါ်လစီဝါဒတွေကို သေချာလေ့လာနားလည်ပြီး မဲပေးတာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပညာလို-အိုသည်မရှိဆိုသလို လူတိုင်းတသက်လုံးပညာကို ဆည်းပူးနေရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အနေအထားမှာ မေးစရာဖြစ်လာတာက ပြည်သူလူထုဟာ ပညာရေချိန်နိမ့်ကျကြလို့ ဒီအာဏာရှင်တွေကို မင်းမြှောက်ထားတာလား။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်တုန်းက ပြည်သူလူထုဟာ အသိရေချိန် နိမ့်ကျလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲတွေ ပုံအောထည့်ခဲ့ကြတာလား။ ဒီနေ့အခြေအနေမှာ အမှားအမှန်မခွဲနိုင်တာ၊ လူဆိုးလူကောင်းမခွဲနိုင်တာဟာ ပြည်သူလူထုလား အဲဒီ “ပညာရှင်” လိုလူတွေလားဆိုတာပါပဲ။ ဗမာပြည်လို အင်မတန် ရက်ရက်စက်စက် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသိဆိုတာ အသည်းနှလုံး ကတဆင့် လာတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ ပညာရှင်တွေပေးမယ့် အသိထက် အများကြီးလေးနက်ပါတယ်။ နောက်မေးစရာတခုကလည်း အင်မတန် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပါတယ်ဆိုဆို၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်ပါတယ်ပဲ ပြောပြော အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရော မဲပေးသူတိုင်းဟာ ပေါ်လစီတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဖတ်ပြီး၊ လေ့လာပြီးမှ ပေးတယ်လို့ ဆိုချင်တာလား။ အဲဒီနိုင်ငံက သာမန်လူတွေမှာ နိုင်ငံရေးဗဟုသုတ၊ နိုင်ငံရေး ပထဝီအသိ စတာတွေကို စိတ်မဝင်စား၊ မလေ့လာလို့ ဘာမှမသိသူတွေ အများကြီးဆိုတာ မကြားဖူးလေရော့သလား။ အိုဘားမားရရှိခဲ့တဲ့ လူမည်းတွေရဲ့ မဲတွေထဲမှာ လူမည်းမို့ပေးတဲ့ မဲဟာ ရာခိုင်နှုန်းမနည်းဘူးဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။
ဗမာပြည်သားတွေဟာ ကနေ့ပညာရေးရေချိန်ထက် နိမ့်ကျတဲ့ရေချိန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကို တွန်းလှန်ခဲ့ကြ၊ ဂျပန်ဖက်ဆစ်ကို တွန်းလှန်ခဲ့ကြတာပါ။ အင်္ဂလိပ်အလိုတောရိ ဆိုတာတွေဟာ စာတလုံးမှမတတ်တဲ့ လယ်သမားတွေ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပညာတတ် တွေထဲက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကို အသိရေချိန်မြင့်စေချင်ရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ စီးပွားရေးအဆင့်အတန်း၊ ဝင်ငွေအဆင့်အတန်းစတာတွေကို မြင့်အောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒီနအဖ စစ်အစိုးရလက်အောက်
မှာ လူတွေ ကြာလေဆင်းရဲလေဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့မပြောဘဲ ပညာရည်နိမ့်ကျတယ်ဆိုတာချည်း ပြောနေတာဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။
ဒီနှစ်ဦးအပြင် အခုတလောမှာ ဖတ်ရကြားရတဲ့ ပြောကြားနည်းတခုက ပြည်သူလူထုကိုမကြောက်အောင်၊ သတ္တိရှိအောင် လုပ်ပေးရေးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလိုအမြင်နဲ့ ပြောင်းပြန် လူထုကိုစိန်ဝင်းလို ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကြောက်နေတာ၊ ကြောင်နေတာဟာ ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူး၊ (တချို့) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ “စိတ်ရှည်ရမယ်၊ သည်းခံရမယ်၊” ဆိုတဲ့စကားဟာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ လူထုကြီးကို စိတ်နောက်ကိုယ်ပါမလုပ်မိဖို့ သတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးတွေဆိုတာဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေက လှုံ့ဆော်စတင်ပြီး ပြည်သူလူထုက နောက်ကလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုထွက်လာတော့မှ နောက်ကလိုက်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့မှာ ဝင်ခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပါတီ၊ ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်လဲ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းနေတာကတော့ ဗမာပြည်ရဲ့ ဒီသမိုင်းအကွေ့မှာ ဘယ်သူနဲ့ လက်တွဲချီတက်မလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့လက်တွဲ ချီတက်မယ့်လူက ပြောနည်းနဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုနဲ့ လက်တွဲချီတက်မယ့်လူကပြောနည်း ဘယ်လိုမှ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ဦးဝင်းတင် ပြောသလို ရွေးကောက်ပွဲတင်းကုပ်ထဲကို မြက်ကျွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နဖားကြိုးဆွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အတင်းခေါ်သွင်းပြီဆိုရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်နေသူတွေဟာ လူထုကို အဲဒီတင်းကုပ်ထဲ ရောက်သွားအောင် နအဖအတွက် တောခြောက်ပေးနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 ရက် 2009 ခုနှစ် 23 နာရီ 09 မိနစ်
အများက အကောင်းမြင်လှတယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာတွေအတွက် အားတက်စရာ အသစ်တခု ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ မကြာသေးခင်က နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ လက်ကြီးဗလာသက်သက် မပြန်ရလေအောင် စီစဉ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ တဖက်ကလည်း သတိထားစရာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ် မအောင်မြင်အောင် ဝှက်ဖဲတွေ အများကြီးလည်း ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့များ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ သမားရိုးကျ ချည်းကပ်နည်းကိုပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို ဆွေးနွေးပွဲဟာလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မေးခွန်း ၃ ခုနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာလို နိုင်ငံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ သံတမန်တွေအနေနဲ့ ပိုပြီး တီထွင်ကြံဆနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးခင်ဗျား .. ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ၂ဝ၁ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီကို အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ လုပ်နေတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆွေတော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ နိုင်ငံရေး Stakeholder တွေ အားလုံး ပါဝင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ကျနော်တို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံ၊ အခြေခံ ဥပဒေ စတာတွေကို မထောက်ခံတဲ့ လူတွေကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ အစောကတည်းက ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး ပါဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကို အဆွေတော်ကို အာမခံ ပြောကြားလိုပါတယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုနေတဲ့ ကိစ္စဟာ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တခြား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးမှသာ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ သူတို့ အားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ အဆွေတော်အနေနဲ့ စဉ်းစားပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ အလေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကို တရားစွဲဆိုနေတဲ့ ကိစ္စဟာ တရားရုံးရဲ့ ကိစ္စသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဆိုသူများကလည်း တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့ ငြိစွန်းလို့ အရေးယူထားရတဲ့ အကျဉ်းသားများသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပါတယ်။ သင့်လျော်သူများကို ထောင်ချီပြီး လွှတ်ပေးနေတာတွေလည်း သူ့အပိုင်းနဲ့သူ
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဆွေးနွေးတာတွေကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဓိက တာဝန်ဟာလည်း အဲဒီ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်သွားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆွေတော်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံက ဘာတွေ ရလိုတယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ပါက ကျနော်တို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆောင်ကြဉ်းပေးလိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘာတွေရလိုတယ်ဆိုတာ ကြေညာချက်တခု ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုကိစ္စက သူမဘက်က တုံ့ပြန်မှု မရှိတာပါ။ ကျနော်တို့ လိုလားချက်တွေကို သဘောတူရင် သူမကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံပါ့မယ်လို့ ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ သမားရိုးကျ စဉ်းစားပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုခဲ့ရင် အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ မေးခွန်း ၃ ခုနဲ့ပဲ လမ်းဆုံးသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထိပ်တန်း သံတမန်များဟာ အခုလို သမားရိုးကျ ချဉ်းကပ်နည်းထက် ပိုတဲ့ နည်းလမ်းများကို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေအရ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဖြေတခုကို စဉ်းစား၊ နှစ်ဖက်စလုံးကို ချပြပြီး အဲဒါဆိုရင် သဘောတူမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို တည့်တည့်မေးရတော့မယ့် အချိန် ရောက်နေပါပြီ။ တပ်မတော်ဟာ သူ အသာစီး မရရင်၊ အခုထက် ပိုကောင်းတာ မရနိုင်ရင် ဘာကိုမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဗကသ အထက်ဗမာပြည် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 ရက် 2009 ခုနှစ် 12 နာရီ 05 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် - ဗကသ အထက်ဗမာပြည် (ယာယီ) ကို မန္တလေးမြို့၌ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က လျှို့ဝှက်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတရပ်တွင် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကို မြေအောက်သဏ္ဍာန်ဖြင့် ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဗကသ၏ အထက်ဗမာပြည် စည်းရုံးရေးကော်မတီ (ယာယီ) ကို လူမျိုးပေါင်းစုံ ၇ ဦးဖြင့် ထပ်မံ၍ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ယမန်နေ့ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျောင်းသားရှိရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိရမယ်။ အဓိကတော့ လက်ရှိ မြန်မာပြည် ပညာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေ နိမ့်ကျနေတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးနဲ့ ကျောင်းသားထု အခွင့်အရေးတွေကို စနစ်တကျ တာဝန်ခွဲဝေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဖွဲ့ တာဝန်ခံ စိုင်းသီဟမောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟု ဗကသ အထက်ဗမာပြည်၏ ကြေညာချက်ထဲ၌ ပါရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်ထားသည့် ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ) တာဝန်ခံ ကိုမင်းနိုင်က ''ကျနော်တို့ သဘောထားတွေနဲ့ ကွဲလွဲတာ မရှိဘူး။ ဖွဲ့စည်းမှုက ကျနော်တို့ သဘောထားအရဆိုရင် ဒီနေ့ ကာလမှာ ဗကသဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေ နေရာအနှံ့ပေါ်နိုင်တယ်။ '' ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်အောက်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ကျရောက်နေသည့် ၁၉၃၆ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂကို တရားဝင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတဝန်း ကျောင်းသားထုအား ကိုယ်စားပြုမည့် သမိုင်းဝင် ဗကသ အဖွဲ့ချုပ်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ဗကသ ညီလာခံများအား ၆ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးနေဝင်း၏ တော်လှန်ရေးကောင်စီမှ တိုင်းပြည်အာဏာ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့အရောက်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၏ ငြိမ်းချမ်းသော ဆန္ဒပြပွဲများအား ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး နောက်တရက်တွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံအား ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
ထိုကာလနောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ဗကသသည် ကျောင်းသားအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုများအား မြေအောက်သဏ္ဍာန်ဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ဗကသ အထက်ဗမာပြည် (ယာယီ) ၏ ကြေညာချက်ထဲ၌ တိုင်းပြည်နှင့် လူထု အကျိုးအတွက် နအဖ စစ်အုပ်စုအား တရားသော နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် တပ်ဦးမှနေ၍ အလံမလဲစတမ်း ပြတ်သားစွာ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ခံ စိုင်းသီဟမောင်က “ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အကျိုးနဲ့ ကျောင်းသားထု အကျိုးအတွက် နအဖ စစ်အုပ်စုကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ ကျောင်းသားထု အကျုိုးကို ကိုယ်ကျိုးမဖက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေးရာ) တာဝန်ခံ ကိုမင်းနိုင်က ''ဒီနေ့ ကာလမှာ သမဂ္ဂတွေ များများ ပေါ်ထွန်းဖို့ လိုတယ်။ စုစည်းမှုကိုတော့ အားပေးတယ်၊ ဖြစ်စေချင်တယ်။ '' ဟု ပြောသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာ-လူထု လုပ်ရှားမှု နောက်ပိုင်းတွင် မတရားအသင်း စွပ်စွဲချက်များဖြင့် ဗကသ အဖွဲ့ဝင်များကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့အထိ မြန်မာအကျဉ်းထောင်များတွင် ကျောင်းသား ၂၉၀ နှင့် ကျောင်းသူ ၂၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးထောင်ချဆဲဖြစ်ကြောင်း ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ) က ပြီးခဲ့သည့်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မိုင်းလားနှစ် ၂၀ ပြည့်ပွဲတော်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ တရုပ်ကောင်စစ်ဝန် တက်ရောက်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 01 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ဗကဗမှ ခွဲထွက်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲကာ အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားအဖွဲ့ NDAA – ESS (National Democratic alliance Army – Eastern Shan State ခေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် - အရှေ့ပိုင်းသျှမ်းပြည်) ထူထောင် ခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်း အနားကို မိုင်းလားဌာနချုပ်၌ ကျင်းပရာ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ပရိတ်သတ်များ စည်ကားသိုက် မြိုက်စွာပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြကြောင်း တရုပ်နယ်စပ်သတင်းက ဆိုသည်။
“မန္တလေးမြို့မှာ ရုံးစိုက်တဲ့ တရုပ်ပြည်ကောင်စစ်ဝန် လဲလာတယ်၊ မိုင်းလားမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ တရုပ်ပြည်က ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်အပြင် မူဆယ်၊ ပန်ဆိုင်း၊ လားရှိုး၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ မိုင်းလွေ၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းယောင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ် က ဧည့်သည်တွေတက်ရောက်လာကြတယ်” - ဟု ပွဲဧည့်ခံသူတဦးက ပြောပြသည်။
ဂျွန်လ ၂၆ - ၃၀ ရက်နေ့ အထိကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါပွဲတော်သို့ အပစ်ရပ်ခေါင်းဆောင်များ SSA မြောက်ပိုင်းအပစ်ရပ် အဖွဲ့ ဒု - ဥက္ကဌ စ၀်ကိုင်ဖှာ့၊ MNDAA ကိုးကန့်အဖွဲ့ ဒု - ဥက္ကဌ ဖုန်ကြားဖူး၊ UWSA ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် ဒု - ဥက္ကဌ ပေါက်ယိုယီးနှင့် ကချင် KIO ၊ ကရင်အပစ်ရပ် (သံတောင်အဖွဲ့)၊ ကယားပြည်မှ အပစ်ရပ်အဖွဲ့လည်း ပါဝင် တက်ရောက်ကြောင်း ပြောပါသည်။ “ကျိုင်းတုံ စစ်တိုင်းရုံးက ဂျီဝမ်း (G.1) စစ်ဦးစီး ပထမတန်း ဗိုလ်မှူးသန်းထွဋ်သိန်း ၊ စရဖ (စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့) ဗိုလ်မှူးရန်နောင်စိုး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဘဲ တက်ရောက်တယ်။ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဖြိုးတော့ မတွေ့ဘူး၊ လက်ဆောင်အဖြစ် ကရ၀ိတ် (ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီးပန်းခြံ က ကရ၀ိတ်ပုံ) ပန်းချီကားတချပ်တော့ ပို့လာတယ်ပြောတယ် ” - ဟု ပွဲတော်တက် ရောက်သူ မြောက်ပိုင်းသျှမ်းပြည်သားတဦးက ဆို၏။
၀ ပြည်ထူထောင်ခြင်းနှစ် ၂၀ ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပစဉ်က စစ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ အောက်ခြေတပ်မှူးအဆင့်သာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ မိုင်းလားပွဲတော်တက်ရောက်ရန် နာမည်နှင့်တကွ ဖိတ်ကြားထားသော်လည်း တက်ရောက်ခြင်းမရှိသည်မှာ တရုပ်နယ်စပ်အခြေစိုက် အပစ်ရပ်များအပေါ် ဆက်ဆံရေး အဆင့်လျှော့ချသည်ကို ပြသခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၀ တပ်မှူးတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောပြပါသည်။
အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလားအဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ကတည်းက ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့ MNDAA ၊ ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော်- ကချင် NDA-K တို့နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု PDF အဖြစ်စု ပေါင်းဖွဲ့စည်း ထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သဖြင့် စစ်အစိုးရ၏နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စကို ပန်ဆန်းအဖွဲ့နည်းတူ ခေါင်းခါ ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်- ကချင် NDA-K က ဂျွန်လ နှောင်းပိုင်း၌ နယ်ခြားစောင့် တပ် အသွင်ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရထံ အကြောင်းပြန်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကူမင်း ကျောက်မျက်ပွဲတွင် ရွှေလီရောက် မြန်မာများ ပြသခွင့်ရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 01 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 06 မိနစ်
ရွှေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့၌ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲသို့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မြို့ ရွှေလီရှိ မြန်မာကျောက်ကုန်သည်များ တက်ရောက်ရန် အာဏာပိုင်များက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ကျောက်မျက်ပွဲကို ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ရွှေလီအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များက ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာများကို မြန်မာကျောက်မျက် ကုန်သည်များအသင်း ရုံးခန်း၌ တွေ့ဆုံကာ ခင်းကျင်းပြသခွင့် ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံကြီးကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။ ဤသည်မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း နှစ်စဉ်ကျင်းပလာသည့် ယင်း ကျောက်မျက်ပွဲသို့ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့နေ မြန်မာကျောက်ကုန်သည်များအား ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်ခွင့်ပြုခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“ရွှေလီအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်က ရွှေလီဟာ ကျောက်မျက်ရတနာ မြို့တော်တခု ဖြစ်တယ်တဲ့။ ရွှေလီမှာရှိတဲ့ မြန်မာကျောက်ကုန်သည်တွေအနေနဲ့ဆို အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ပါကို ပါရမယ်တဲ့။ နောက်တခုက တရုတ်အစိုးရဘက်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ ဥပဒေနဲ့အညီ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်၊ ဒါကြောင့် ခွင့်ပြုတာတဲ့” ဟု ယမန်နေ့ အစည်းအဝေးသို့ သွားရောက်ခဲ့သူ မြန်မာကုန်သည်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ရွှေလီအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြန်မာများ တက်ရောက်ခဲ့ကာ ကုန်သည်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုပါ သတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်။
ပြပွဲတွင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရန်၊ အတင်းအဓမ္မ ခေါ်ယူရောင်းချခြင်းနှင့် ကျောက်မျက် အတုများ သယ်ဆောင်ရောင်းချခြင်း မပြုရန်၊ ကျောက်အရည်အသွေးကို မှန်ကန်စွာ ပြောဆိုရောင်းချရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ရွှေလီအစိုးရဘက်မှ အကူအညီများ ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကူမင်းပြပွဲသို့ သွားရောက်မည့် နောက်ထပ် မြန်မာကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
''ခါတိုင်းဆို ကူမင်းသွားဖို့အတွက်က ရွှေလီရောက်နေတဲ့ သာမန် မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ မလွယ်ဘူး။ ကူမင်းကို သွားနိုင်ဖို့ဆို သွားခွင့်လက်မှတ် လုပ်တဲ့အခါ ခက်ခဲတာ ရှိတယ်၊ မလုပ်ပေးတာ ရှိတယ်။ လက်မှတ်အတွက်ပဲ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ယွမ်လောက် ကုန်တယ်။ အခုက တရုတ်အစိုးရဘက် ပံ့ပိုးမှုက နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာရဖို့အတွက် ၁၄၀ ပဲ ကုန်တယ်၊ တလ နေထိုင်ခွင့်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ပစ္စည်းတွေကလည်း သူတို့ဟာသူတို့ ကားအပြတ်နဲ့ သယ်ပေးမယ်။ အခွန်ဆောင်ရတာလည်း လွယ်ကူတာပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။
“မြန်မာကုန်သည် တယောက်အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်အတွင်းပိုင်း ကူမင်းမြို့အထိ သွားရောင်းရတာမျိုး မကြုံဖူးဘူး။ မျက်စိပွင့်နားပွင့်၊ စီးပွားရေးအမြင်တွေတော့ ရလာမှာပဲ။ ရောင်းရဝယ်ရတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေ အဆင်ပြေမလဲ သိလာမှာပေါ့။ အခုတခေါက်က မြေစမ်းခရမ်းပျိုးပါပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ရွှေလီရှိ မြန်မာကျောက်ကုန်သည် ၅၀ ခန့်သည် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြပွဲသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ကျောက်ကုန်သည်အချို့လည်း ရွှေလီသို့ ရောက်နေပြီဟု မြန်မာကျောက်မျက် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကူမင်း ကျောက်မျက်ပြပွဲကို ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရက ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကူမင်းမြို့ နိုင်ငံတကာ ကျောက်မျက် ရတနာ စင်တာ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ဘားအံတွင် တုပ်ကွေးဖြစ်သူ များနေ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 ရက် 2009 ခုနှစ် 21 နာရီ 07 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် လူနာ အများအပြား ရှိနေကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ဖြစ်ပွားသူများထဲတွင် ကလေးငယ်များနှင့် အသက် ၁၇ နှစ်ထိ ပါဝင်ကြောင်း ဘားအံမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် တုပ်ကွေးဖြစ်၍ ဆေးရုံတက် ကုသခဲ့ရသည့် ကလေးငယ်တဦး၏ မိခင်က ပြောသည်။
“မြို့ပေါ်ရော ရွာဘက်မှာရော အသက်က ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးတွေ များတယ်။ ၉ တန်း ၁၀ တန်းအရွယ်တွေလဲ ဖြစ်နေတယ်။ အန်တီ့ ကလေးကို ဆေးရုံ သွားပို့တော့ တုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေ အရမ်းများနေတယ်။ ရိုးရိုးတုတ်ကွေးလိုလို၊ သွေးလွန် တုတ်ကွေးလိုလို ပြောတာဘဲ။ ဝက်တုပ်ကွေးလို့တော့ မပြောဘူး” သူက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများတွင် ကိုယ်ပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ မျက်စေ့နီခြင်း၊ အဖျားကြာခြင်း၊ အနီဖုများထွက်ခြင်း စသည့် လက္ခာဏာများ တွေ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ဘားအံဆေးရုံရှိ ကုတင် ၂၀ ရှိ အခန်းတွင် ကုတင်မဆန့်သဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ပင် ဖြစ်သလိုနေ၍ ကုသမှုခံနေရသည့် လူနာများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘားအံမြို့နယ် ဆေးရုံသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းသော်လည်း ဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်သွားသည်။
မည်သို့သော တုပ်ကွေးဖြစ်သည်ကို ဆရာဝန်များက စောင့်ကြည့်နေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ကောလာဟလများကြောင့် မြို့ခံများအကြား ထိန့်လန့်မှုများ ရှိနေကြသည်။
ချင်းပြည်နယ် မိုးခေါင်သဖြင့် စပါး မစိုက်နိုင်သေး
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 03 ရက် 2009 ခုနှစ် 00 နာရီ 06 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မိုးရွာသွန်းမှု နောက်ကျသဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် အခက်တွေ့နေကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ဒေသတွင်း အခြေစိုက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုကြသည်။
နှစ်စဉ် မေလအတွင်း မိုးဦးကျတတ်သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ချင်းပြည်နယ် တခုလုံးနီးပါး၌ မိုးရွာသွန်းမှု မရှိသေးသောကြောင့် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်စလုံးရှိ တပိုင်တနိုင် ဝမ်းစာစပါး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ရန် အခက်ကြုံနေရကြောင်း ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“အခုချိန်ထိ မိုးကို မရွာသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဟားခါးမှာဆိုရင် အရင်နှစ်တွေက မေလဆို ရွာပြီ။ ဒီနှစ်ကျတော့ အခုထိကို မရွာသေးဘူး။ မရွာတာက ချင်းပြည်နယ်တခုလုံး နီးပါးပါပဲ” ဟု ချင်းပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် အခြေစိုက် ချင်း လူသားချင်း စာနာမှုနှင့် ကယ်ဆယ် စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ - CHRC မှ တာဝန်ခံ ဆလိုင်းကျင်ဇာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဟားခါးမြို့နယ်သည် ချင်းပြည်နယ်တွင် မိုးရွာသွန်းမှု အများဆုံး ဒေသဖြစ်သည်။ သို့သော် အားတက်ဖွယ်ရာ တခုမှာ မိုးရွာနိုင်ခြေများသည်ဟု မြန်မာ့မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဌာနက ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးဇလ၏ အလိုအလျောက် ဖြေကြားစက်က “မနက်ဖြန် ညနေအထိ ခန့်မှန်းချက်ကတော့ ကယားပြည်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း အောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတို့မှာ နေရာကွက်ကြား၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းတို့မှာ နေရာကျဲကျဲ၊ ရှမ်းပြည်နယ် တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာ နေရာစိတ်စိတ်နှင့် ကျန်ဒေသတွေမှာ နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရွာရန် ရွာနှုန်း ၈၀ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပါရှိသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် စပါးစိုက်ပျိုးမှုသည် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း မဟုတ်ဘဲ၊ မိသားစုအတွက် ဝမ်းစာစပါးအဖြစ် စိုက်ပျိုးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ဝါးသီး သီးပြီးနောက် ကြွက်များသည် ဝါးအပွင့်များကို စားသုံး၍ ပိုမို၍ မျိုးပွားမှုနှုန်း မြင့်တက်လာကာ အစားအစာအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ခင်းများကို စားသောက်ဖျက်ဆီးသဖြင့် ဟားခါး၊ ထန်ထလန်၊ မတူပီ၊ ကန်ပက်လက်နှင့် မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် မျိုးစပါးနှင့် စိုက်ပျိုးစရိတ် ပိုမိုခက်ခဲနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ယခုနှစ်တွင်လည်း ထန်ထလန်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့၌ စပါးမျိုးကြဲသောအခါ ကြွက်များက မျိုးစေ့များကို စားသောက်ပစ်သည်များ ထပ်မံကြုံတွေ့နေရပြန်သည်။
“အခုနောက်ပိုင်း ငြိမ်နေတာ။ လယ်ပြန်လုပ်တော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုထွက်လာလဲ မသိဘူး။ ဒီနေ့ စပါးမျိုး ကြဲလိုက်ရင် ညဆိုရင် မရှိတော့ဘူး။ စားစားကုန်တာ။ ဘယ်လိုမှ လယ်လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်” ဟု ထန်တလန်မြို့နယ် နှရိမ်ကျေးရွာမှ ရွာသားတဦးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
နှရိမ်ရွာတွင် လယ်ဧက ၈၀ ခန့် ရှိရာမှာ ယခုအချိန်ထိ မည်သူမှ စပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
''မိုးမရွာတော့ ပိုဆိုး၊ အရေးထဲ ကြွက်က တချို့နေရာတွေမှာ ပြန်ထနေတယ်လေ” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ - CAD မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဂျိုးဇက် ဝင်းလှိုင်ဦးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် လယ်ဧက သိပ်မရှိဘူး။ တောင်ယာပဲ လုပ်ကြတာလေ။ … ရှိတဲ့လယ်တွေ စိုက်မယ် ဆိုတော့လည်း မိုးမရွာ၊ ကြွက်ကဖျက်နဲ့ လှည့်ပတ်နေတယ်၊ ပြဿနာက” ဟု မတူပီမြို့ ဒေသခံက ပြောသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ဒေါ်စုလွှတ်ပေးရန် ထပ်မံတောင်းဆို
ကြာသပတေးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 31 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အနေနှင့် အတိုက်အခံများအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရန်နှင့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက သူ၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် မစတင်ခင် အင်္ဂါနေ့က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေဖြင့် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရန်၊ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များအကြား ဆွေးနွေးမှု စတင်ရန်နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အယုံအကြည် ရှိစေနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်နဲ့ ဥပဒေအခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးရန် ဘန်ကီမွန်းက ထပ်မံတိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မူ၊ ပန်းတိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေနဲ့ တခြား ခေါင်းဆောင်တွေဆီ သယ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ဘန်ကီမွန်းက ပြောဆိုသည်သာမက အခြား အောက်ခြေ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၅ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဖြင့် လာရောက်သော သူ၏ ခရီးစဉ်ကို အသုံးချကာ လိပ်ခဲတည်းလည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်း၏ စိုးရိမ် ပူပန်ချက်များကို အလေးအနက်ထားကာ အင်ပြည့်အားပြည့် ဖြစ်နိုင်ခြေများဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သတင်းထောက်များကို ဂျပန်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျနော်သွားမယ့် အချိန်မှာ ဒေါ်စုရဲ့အမှု ကြားနာမှု ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ ကျနော် အတော်ပဲ နိုးနိုးကြားကြား ရှိပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ အချိန်ကောင်း၊ အခါကောင်းရဖို့ ဆိုတာလည်း ကျနော့်အတွက် စိန်ခေါ်မှု တရပ်လည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မစ္စတာ ဘန်က ပြောသည်။
အထိန်းသိမ်းခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြီးခဲ့သည့် မေလအစောပိုင်းက သူ၏ နေအိမ်သို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်လာသော အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန် ဝီလျံ ယက်တောကို တည်းခိုခွင့်ပေးသည်ဟုဆိုကာ အကျယ်ချုပ် စည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုသဖြင့် ယခုအခါ တရားရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မစ္စတာ ဘန်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့် သောကြာနှင့် စနေနေ့ နှစ်ရက်ကြာ သွားရောက်မည်။ သူသည် သူ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည်သို့ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စေ့စပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ခန့်အပ်ခံထားရသော မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၈ ကြိမ်တိုင် လည်ပတ်ပြီး ဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံများနှင့် နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီအနေနှင့် သူ၏ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်း မသေးကြောင်း ပြောဆိုဝေဖန်ကြသည်။
ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအမှုဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံမည်
NEJ / ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း အာဏာပိုင်များဘက်မှ ယနေ့အကြောင်း ကြားခဲ့သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “ဖိတ်တာကတော့ (၅) ဦးဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဥက္ကဋ္ဌ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက် (၄) ဦးပဲ တက်ပါ့မယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့မယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်တော့ လူကြီးတွေပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ သတင်းတွေ ထွက်နေတာတော့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီဘက်မှ တွေ့ဆုံမည့် (၄) ဦးမှာ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးညွန့်ဝေနှင့် ဦးစိုးမြင့်တို့ ဖြစ်သည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံလိမ့်မည်ဟု သတင်းများပေါ်ထွက်နေသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
“ကျနော် အခုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဆီကို တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းကြားတာတွေ ဘာတွေ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် မနက်ဖြန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည့်ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အစိုးရသတင်းရပ်ကွက်ကို ကိုးကားပြီး ရန်ကုန်မှလာသော ဒီပီအေသတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရောက်သည့်အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် အသေးစိတ် အစီအစဉ်ကို မပြောနိုင်သေးကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် အစိုးရအရာရှိတဦးကို ကိုးကားပြီး သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇူလိုင် (၃) ရက်နှင့် (၄) ရက်တွင် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် (၂) ရက် ခရီးစဉ်အတွင်း မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် မေလက ၎င်းရောက်ရှိခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့လည်း သွားရောက်ရန်ရှိကြောင်း ဒီပီအေသတင်းတွင် ပါရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိပ်ပေါင်းခေါင်းဆောင်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးကိစ္စကို တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံတို့ကြား အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးမှု ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အများလက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်စေရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးရန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ရောက်ရှိမည့် ဇူလိုင် (၃) ရက်နေ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲတင်စစ်ဆေးနေသော အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးတရားခွင် စစ်ဆေးမည့်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာယက်တော နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ၀င်ရောက်ခဲ့မှုအတွက် နအဖစစ်အစိုးရက မေ (၁၈) ရက်တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု ပုဒ်မ (၂၂) ဖြင့် အင်းစိန်အထူးတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လောလောဆယ်တွင် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းခံနေရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) ကမူ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြန်ကျစေမည့် အရေးကို လက်မခံသင့်ကြောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သင့်ကြောင်း ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် အထီးကျန်ဖြစ်နေသည့် လုပ်ရပ်များကို အဆုံးသတ်စေမည့် လမ်းပြမြေပုံတခုကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအား ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း၊ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ရန် အချိန်ဆွဲနေခြင်း၊ လှည့်စားနေခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်ရန် အချိန်တန်နေပြီဆိုသည်ကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်း အနေဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင့်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်သည် အမှန်တကယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေကြောင်း ယင်းအဖွဲ့ကြီး၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Kenneth Roth က ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့် သြဂုတ်လ (၁) ရက်မှစ၍ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများသည် စာပေစိစစ်ရေးသို့ တင်ပြမည့် ၎င်းတို့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့် စာမူများကို စက္ကူပေါ်တွင် မိတ္တူကူးပြီး တင်ပြရမည့်စနစ်အစား ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင် (PDF File) အဖြစ် စီဒီနှင့် ပြောင်းလဲတင်ပြရတော့မည်ဖြစ်သည်။
စာမူများကို ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်ဖြင့် တင်ပြခြင်းအားဖြင့် စာပေစိစစ်ရေးရုံးတွင်းလုပ်ငန်း ပိုမိုအဆင်ပြေလာစေရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးတွင်း၌ တယောက်နှင့်တယောက် ကွန်ပျူတာနှင့်အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးနိုင်ရန် အင်ဖိုရစ်သမ်မေ့ဇ် ကုမ္ပဏီကို ဆာဗာထိုင်ခိုင်းထားကြောင်း စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရင်းနှီးသူ သတင်းအယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “နောက် တင်ပြလာတဲ့ အထူးသဖြင့် ဓာတ်ပုံတွေကိုဆိုရင် အရင်ကဆို အဖြူအမည်း မိတ္တူကူးပြီး တင်ပြတော့ သူတို့ စစ်ဆေးရတာ သိပ်အားရပုံ မရဘူး။ ခုဆို ရောင်စုံနဲ့ သေသေချာချာ ပြတ်ပြတ်သားသား စစ်ဆေးနိုင်တော့မယ်။ နောက်တချက် စာပေစိစစ်ရေးဟာ ထောက်လှမ်းရေးဌာနနဲ့ တူတယ်။ သူတို့ ခွင့်မပြုချင်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ပုဒ် တင်ပြလာရင် ခွင့်မပြုရုံမက အဲဒီသတင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်၊ ဌာနဆိုင်ရာကို ပေးပို့အကြောင်းကြားလေ့ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်ရှိထားခြင်းအားဖြင့် စာပေစိစစ်ရေးအနေဖြင့် ၎င်းတို့လိုရာသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ရန် လွယ်ကူသွားသည့်အပြင် နေပြည်တော်တွင်ရှိသည့် စာပေစိစစ်ရေး၏ အထက်ဗိုလ်ချုပ်များကိုလည်း သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချက်ချင်းအစီရင်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ သတင်းအယ်ဒီတာက ပြောသည်။
“ပြဿနာတခုခုဖြစ်တဲ့ သတင်းတွေဆိုရင်လည်း စာပေစိစစ်ကို တောင်းရင် ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင် ဖြစ်တာကြောင့် အီးမေးလ်နဲ့ ချက်ချင်း သူတို့ပေးပို့လာနိုင်မယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့ ရုံးတွင်းမှာ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်တွေအားလုံးကို ဟာ့ဒစ်စ်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ စုလာနိုင်မယ်။ သူတို့ ဖိနှိပ်တဲ့ ယန္တရားအတွက်တော့ ကောင်းသွားမှာ သေချာတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
စာပေစိစစ်အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် စာပေစိစစ်ရေးဆိုင်ရာမူနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမူ လုံးဝ အလျော့ပေးမည်မဟုတ်သည့်အတွက် စိစစ်ဖြတ်တောက်မှု လျော့ကျသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း ဂျာနယ်အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
“ဒီအတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ပိုရှိလာမှာ မဟုတ်သလို ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမှုတွေလည်း လွယ်ကူသွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ခုဟာက ကျနော်တို့ ဂျာနယ်တွေ ပထမစာမူကို တပတ်ကြိုတင်ရတယ်။ ကြားထဲမှာ နောက်ဆက်တွဲ တင်ရတယ်။ ပထမစာမူကို ချပေးတာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲစာမူ ထပ်တင်တာကိုလည်း ချိတ်ဆက်မမိဘူး။ ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်စနစ်ဆိုပြီး စာမူကို မြန်မြန်စစ်ပေး၊ ချပေးတာမျိုးလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက် ဖြတ်တောက်၊ တားမြစ် ပိတ်ပင်တာလည်း လျော့ကျသွားမှာ မဟုတ်လို့ ဘာမှမထူးဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ယခု Electronic Press Scrutiny and Registration (EPRS) စနစ်ကို သြဂုတ်လ (၁) ရက်တွင် စတင်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သော်လည်း ဇူလိုင်လအတွင်း ၎င်းတို့နှင့် ရင်းနှီးသည့် အားကစားဂျာနယ်အချို့ကို စပြီး အစမ်းကျင့်သုံး သွားမည်ဟု သိရသည်။
အလုပ်ရှင်မရှိသဖြင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်သူ နည်းပါး
မဲဆောက်ဒေသအတွင်း သိန်းချီရှိနေသည့် မြန်မာလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် တာဝန်ယူ ပြုလုပ်ပေးမည့် အလုပ်ရှင်မရှိသောကြောင့် လက်ရှိလာရောက် မှတ်ပုံတင်သူအရေအတွက် အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိသည်။
မဲဆောက်တွင် ယမန်နေ့မှစတင်၍ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအား အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပြုလုပ်ပေးရာတွင် လာရောက်မှတ်ပုံတင်သူ ဆယ်ဂဏန်းခန့်သာ ရှိသည်။
ယင်းသို့နည်းပါးရခြင်းမှာ အလုပ်ရုံစက်ရုံအများစုတွင် စီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းမှုနှင့် ဆက်နွှယ်ပတ်သက်နေကြောင်း မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောသည်။
မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာပြည်သားများအရေး ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ (JACBA) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမိုးကြိုးက “စီးပွားရေးကပ်စိုက်တဲ့အထဲမှာ ထိုင်းအလုပ်ရုံစက်ရုံတွေလည်းပါတော့ စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်ကမရှိ၊ အော်ဒါကလည်း မလာဆိုတော့ အတော့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲလည်ပတ်နေရတယ်။ အလုပ်သမားအသစ်ခေါ်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆိုတာက လူတဦး ဘတ် (၃,၈၀၀) ဆိုတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ကြမှာလဲ” ဟု ပြောသည်။
မယ်ပအထည်ချုပ်စက်ရုံကြီးတခုမှ ထိုင်းမန်နေဂျာကလည်း “ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ အတော်များများက အလုပ်ပါးတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေ လျှော့ချနေရတဲ့ အနေအထားဆိုတော့ လူသစ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ပေးဖို့ဆိုတာ စက်ရုံတိုင်းမှာ အခက်အခဲရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား တသိန်းခွဲခန့်ရှိသည့် မဲဆောက်ဒေသတွင် စက်ရုံအလုပ်ရုံ (၂၀၀) ခန့်ရှိပြီး မဲဆောက်မြူနီစပယ်ရုံး၌ လူသစ်များ လက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ယမန်နေ့က လူ (၃၀) ခန့်နှင့် ယနေ့တွင် လူ (၆၀) ခန့်သာရှိသည်ဟု သိရသည်။
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ရန်လာသည့် မဲဆောက်ညဈေးမှ မအေးသန်းက “ကျမအလုပ်ရှင်က လက်မှတ်မလုပ်ပေးတော့ ကိုယ့်ကို အလုပ်ရှင်အဖြစ် အာမခံပေးမယ့် ထိုင်းတယောက်နဲ့ သွားလုပ်ရတယ်။ သူ့ကို အာမခံခ ဘတ် (၁,၀၀၀) ပေးရတယ်။ ကိုယ်က လက်မှတ်လိုချင်တော့ ဒီလိုပဲကြံဖန်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာအလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်လိုကြခြင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ထားသူသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအတွက် ထိုင်းဘတ်ငွေ (၃၀) ဖြင့် မဲဆောက်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးကုသခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သွားရေးလာရေးနှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများတွင် တရားဝင်မှုရှိသဖြင့် လက်မှတ်မရှိသူများနှင့်ယှဉ်လျှင် တရားဝင်ခံစားခွင့်များ ရရှိသောကြောင့် အလုပ်သမားအများစုက မှတ်ပုံတင်လိုကြခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုင်းအလုပ်ရှင်များမှာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသည့် တရားဝင်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်မရှိသေးသော အလုပ်သမားများကိုပင် လက်မှတ်ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိပြီး မှတ်ပုံတင်ရှိသူနှင့် မရှိသူများကို ရောနှော၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေရသည်ဟု မဲဆောက် သိုးမွှေးအထည်ချုပ်စက်ရုံမှ မြန်မာအလုပ်ကြပ်တဦးဖြစ်သူ ကိုသန်းနိုင်က ပြောသည်။
မဲဆောက်တွင် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကို အလုပ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးသည့် ကာလကို ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ယခုလ (၁) ရက်မှ (၃၀) ရက်နေ့အထိ အလုပ်ရှင်၏ အာမခံချက်ဖြင့် လူသစ်များကို နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ထောရော (၃၈/၁) ကို ပြုလုပ်ပေးပြီး သွေးစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပြုလုပ်မည့်ရက်ကို လာမည့် သြဂုတ်လ (၁) ရက်မှ (၂၈) ရက်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတဦးအတွက် (၁) နှစ်စာ ဘတ်ငွေ (၃,၈၀၀) ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်ရောက်ရှိနေကြသည့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား (၂) သန်းခန့်ကို ယခုလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
နအဖတပ်ရင်းမှူး၏အမိန့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ မလိုက်နာ
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပေါ် နှစ်နေရာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် နယ်မြေခံ နအဖ တပ်ရင်းမှူး ချမှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်မှုများအား ယင်းဒေသအခြေစိုက် အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာခြင်း မရှိဘဲ ငြင်းဆန်နေကြကြောင်း နယ်စပ်မှလာသော သတင်းများအရ သိရသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားအပြီး နောက်တရက် ဇွန် (၂၉) ၌ ခလရ (၃၂) တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်ဇော်က အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အား ခေါ်တွေ့ကာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဟု ခွဲခြားရန် လွယ်ကူစေရေး အကြောင်းပြကာ အလံ (သို့မဟုတ်) အရောင်များဖြင့် ခွဲခြား၍ သေနတ်တိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားကြရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများကမူ ဇူလိုင် (၂) ရက် ယနေ့အထိ ယင်းအမိန့်အတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြချေ။
ယင်းဒေသတွင် တာဝန်ကျနေသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တဦးက “ဒါ မတရားသဖြင့် သက်သက်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ မလိုက်နာတာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ကျနော်တို့လည်း အထက်ကို တင်ပြထားတယ်။ ဒီဗုံးကွဲတဲ့ကိစ္စကြောင့်နဲ့ သေနတ်ဒင်တွေမှာ အလံတို့၊ ဆေးသုတ်တာတို့ လုပ်ဖို့အထိ မလိုအပ်ဘူး ထင်လို့ပါ။ အခြား ဒီကေဘီအေတို့၊ ကေပီအက်ဖ်တို့ ကလည်း လိုက်မလုပ်ကြဘူးလို့ ကြားတယ်” ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
အလံအရောင်များအနေဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား အနီရောင်၊ ဒီကေဘီအေအား အဝါရောင်နှင့် ကေပီအက်ဖ်အဖွဲ့အား အပြာရောင်အလံများ (သို့မဟုတ်) သေနတ်ဒင်များတွင် အရောင်ခြယ်ထားရန် အဆိုပါနယ်မြေခံ နအဖတပ်ရင်းမှူးက အမိန့်ပေးထားကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရ၏ လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည့် ခမရ (၃၅၆) သည် ဘုရားသုံးဆူမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတို့ကလည်း မိမိတို့သွားလာရေးအတွက် လုံခြုံရေးများ အပြည့်ချထားကြောင်း အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သိရသည်။
၂၀၀၉ ခု ဇွန် (၂၈ ) ရက် ည (၈) နာရီဝန်းကျင်တွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့ ရပ်ကွက် (၃) နှင့် (၄) တွင် ဗုံးနှစ်လုံး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် မည်သူ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း နအဖစစ်တပ်က ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိသေးသော်လည်း လုံခြုံရေး အကြောင်းပြကာ ဗုံးပေါက်ကွဲရာ ဥဒေါင်းကန်လမ်းတလျှောက်ကို ညပိုင်းတွင် နအဖစစ်တပ်မှအပ မည်သူ့ကိုမျှ ဖြတ်သန်းခွင့် မပြုခဲ့ပေ။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ပျဉ်ဘိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၅) ရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း (၄) ကျောင်းမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လဲပြိုပျက်စီးသွားခဲ့ရာ ယခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်၌ ကပ်ဗလာချောင်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်းသာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ကာ ကျန် (၃) ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် ကူညီပံ့ပိုးမည့် အသင်းအဖွဲ့မရှိ ဖြစ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းဆောင်တုိ့သည် (UNDP) ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော တိုက်ခံ၊ သွပ်မိုး၊ အဆောက်အအုံ များဖြစ်ပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လုံးဝပျက်စီးလဲပြိုခဲ့ရသည်။ ယခုအခါ ဒေသခံမူလတန်းကျောင်းသားများသည် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ရပ်ကွက်အေးချမ်းဖြိုးရုံးများ၏ ယာယီကျောင်းဆောင်များ၌ အစိုးရခန့်၊ ဒေသခန့် ဆရာများနှင့် ပညာသင်ကြားနေကြရသည်။ အဆိုပါစာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုလည်း ဘိုကလေးမြို့နယ် အေးချမ်းဖြိုးမှ ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ကပ်ဗလာချောင်းကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းဆောင်ကို “မြန်မာကရုဏာ” NGO ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပျဉ်ဘိုးကြီး၊ ပျဉ်ဘိုးလေး၊ ဓမ္မသုခကျေးရွာ မူလတန်းစာသင်ဆောင်များမှာ ယာယီကျောင်းဆောင်များအဖြစ်သာ ရှိနေကြသည်။
အဆိုပါကျောင်းများတွင် မူလတန်းကျောင်းသား (၁၅၀) ခန့်စီရှိကြပြီး UNICEF ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဗလာစာအုပ်၊ စာရေးကိရိယာ လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေကြသော်လည်း နိုင်ငံတော်မှ ဖြန့်ချိသည့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် (TEXT BOOK) များ လုံးဝမရရှိကြောင်း ဒေသခန့်ဆရာတို့က ပြောသည်။
“အဲလို ပင်လယ်ပိုင်း အစွန်အဖျားကျေးရွာတွေ မပြောပါနဲ့။ ဘိုကလေးမြို့ပေါ် ကျောင်းတွေမှာတောင် TEXT BOOK ကို မဲစနစ်နဲ့ ပေးနေရတယ်။ (၈) တန်း ဘာသာစုံ TEXT BOOK တစုံ (၈,၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ကျောင်းသားတွေ အပြင်က ၀ယ်သုံးကြရတယ်” ဟု ဘိုကလေးမြို့ခံဆရာတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က Diamond Mercury-NGO အဖွဲ့မှ ဓမ္မသုခကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် အုတ်များ စီချအပြီး မကြာမီ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှန်းမသိရဘဲ ပြန်သယ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ပျဉ်ဘိုးလေးကျေးရွာတွင်လည်း အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသည့် အုတ်များဖြစ်နေသောကြောင့် ပြန်သယ်သွားကြောင်း၊ ပျဉ်ဘိုးကြီးကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်ကိုမူ မည်သည့်အဖွဲ့မှ လာရောက်ခြင်းမရှိကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လဲပြိုသွားသော စာသင်ကျောင်းဆောင်များအား အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် အလားတူအခြေအနေများကို ဘိုကလေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအတော်များများတွင် တွေ့နိုင်ကြောင်း မြို့ခံတို့က ပြောသည်။
အဆိုပါ ပျဉ်ဘိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျောင်းနေရွယ်ကလေးငယ်များ ကျောင်းနေရေး၊ ကျောင်းနေကလေးများ အတန်းပညာ ပြီးဆုံးအောင် သင်ကြားရေးတို့အတွက် မိဘ၊ ဆရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား ညွှန်ကြားခဲ့သော စက်ဆန်း ဒိုင်နယ်နှင့် အလွန်နီးကပ် စွာ တည်ရှိသည်။
သိမ်နံရံပေါ်မှ ဆရာတော် တပါး၏ပုံရိပ် စိတ်ဝင်းစားသူများပြား
Thursday, 02 July 2009 18:37 ဝေဆန်း
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံမြို့နယ်၊ လမုတန်း ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ လမုတန်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဝန်းအတွင်း ဆောက်လက်စ သိမ်ကျောင်း အုတ်နံရံပေါ်တွင် ဆရာတော်တပါး၏ ပုံရိပ်ပေါ်လာ သည်ဟူသည့် သတင်း ကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ သွားရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည်ဟု သိရသည်။
သိမ်နံရံပေါ်တွင် ပေါ်နေသည့် ဆရာတော်တပါး၏ ပုံရိပ်ကို ဤသို့တွေ့ရသည်
၎င်းပုံရိပ်ကို သိမ်ကျောင်းအတွင်း ပလ္လင်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ပန်းရံသမား တဦးက စတင် မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီလောက်မှာ ပန်းရံသမား တယောက်က ပလ္လင်ရဲ့နောက်က အုတ်နံရံမှာ ပေါ်နေတဲ့ အစိုပျံတဲ့ အကွက်ပုံစံက ဆရာတော်တပါးရဲ့ ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး စ သတိထားမိရာက တယောက်စကား တယောက် ပျံ့သွားပြီး ဟိုလူလာကြည့်၊ ဒီလူလာကြည့် လုပ်ကြတာ” ဟု ၎င်း သိမ်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ပါဝင်သည့် ပန်းရံသမားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဦးပဉ္ဇင်းတပါးနှင့် လာရောက်ကြည့်ရှုသူများက အုတ်နံရံတွင် ပေါ်နေသော ပုံရိပ်မှာ ပလ္လင်ပြုလုပ်နေသည့် နေရာအနီးတွင် အပူဇော်ခံထားသော ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ပျံလွန်သွားခဲ့သည့် သီဟိုဋ်ပြန် ဓမ္မကထိက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီး ဘဒန္ဒ၀ံသ၏ ပုံတော်နှင့် တူနေကြောင်း ပြောဆိုနေကြ သည်။
ဆရာတော်ပုံရိပ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးဖြစ်သောကြောင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အုတ်နံရံအနှံ့ အငွေ့ပျံခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေငွေ့ပျံသည့်ပုံစံက ဦးခေါင်းပုံစံထွက်လာသည်မှာ ထူးခြားသည်ဟု ဆိုလျှင်ဆိုနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါသိမ်ကျောင်းတော်ကို ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဘန်ကီမွန်း ခရီးစဉ် အပေါ် NLD မျှော်လင့်ချက်မထား
Thursday, 02 July 2009 19:33 ကိုစိုး
မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာမီ ရောက်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြီးမားသည့် အပြောင်းအလဲကို မျှော်လင့်မထားကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ပြောသည်။
“လမ်းပွင့်ရုံလောက်တော့ မျှော်လင့်တယ်၊ အကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲတော့ ဒီတခေါက်နဲ့ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် တို့ မမျှော်လင့်ဘူး”ဟု NLD ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ရောက်ရှိလာပါက NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် (CEC) ၅ ဦးနှင့် တွေ့ဆုံရမည်ဖြစ် ကြောင်း ယမန်နေ့တွင် အာဏာပိုင်များက အကြောင်းကြားလာသည်ဟုလည်း ၎င်း က ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ဆီက CEC ၅ ဦးနဲ့ တွေ့ဖို့ မနေ့က အကြောင်းကြားထားပါတယ်၊ ဘယ်တော့လဲ ၊ ဘယ်အချိန်လဲ ၊ ဘယ်နေရာလဲ ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး”ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်း က ပြောပြသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် လက်ရှိ တရားရင်ဆိုင်နေရသော NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါ အဝင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံမည် မတွေ့ဆုံမည်ကိုမူ မသိရှိရသေးချေ။
ယမန်နေ့က အဆိုပါ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD တွင် အစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ် ကြောင်း၊ သို့သော် အသေးစိတ်မပြောဆိုနိုင်သေးကြောင်းလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းသည် စစ်အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇူလိုင် ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်နေ့များတွင် မြန်မာပြည်သို့ ဒုတိယအကြိမ် ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းကြေညာချက်ကို ယခင်တပတ်က မြန်မာပြည်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာ ဟင်ဂန်ဘာရီ မြန်မာပြည်မှ ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်တွင် အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနှင့် ယခု ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးရန်၊ အတိုက် အခံများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စစ်အစိုးရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးရန် စသည့် အချက် ၃ ချက်ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂကလည်း မြန်မာ စစ်အစိုးရကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပြု လုပ်ရန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးရန်တို့ကို တောင်းဆိုထားသည်။ ယင်းတောင်းဆိုချက်များ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လိုကြောင်း မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလအတွင်း နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာ နိုင်ငံသို့ပထမအဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်သည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ ပေးရန် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ မသွားရောက်ခင် ၎င်းက ပြော ဆိုခဲ့သည်။
ထိုခရီးစဉ်အတွင်း၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပါအဝင် စစ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဘောလုံးနှင့် လောင်းကစား ရန်ကုန်တွင် လူကြိုက်များ
Thursday, 02 July 2009 19:41 ဇာနည်ဝင်း
ရန်ကုန်မှ ဘောလုံး ပရိသတ် အလွန်အမင်း နှစ်သက်သည့် ဥရောပဖလား ပွဲစဉ်များ ရပ်နားထားသည့် အချိန်တွင် ရသေ့စိတ်ဖြေ ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ပြည်တွင်းဖြစ် ဘောလုံးပွဲစဉ် တခု ရှိနေသည်။ ထိုပွဲစဉ်မှာ ပရိုစနစ်သို့ ကူးပြောင်းလာသည့် မြန်မာ ဘောလုံး လောက၏ ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် MNL ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပွဲစဉ်တခု (ဓာတ်ပုံ - ygnutd.com)
လွန်ခဲ့သည့် ၂ လခန့်က စတင်ပြုလုပ်နေသည့် MNL CUP Grand Royal 2009 ပွဲစဉ်များမှာ မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အဆုံးသတ်မည် ဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဗိုလ်လုပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်း ကိုယ်စားပြု ရတနာပုံ F.C နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ကိုယ်စားပြု ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် F.C တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤအသင်းနှစ်သင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်လက တကြိမ်တွေ့ခဲ့ရာ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့သည့်အတွက် ခြေမကွာသော အသင်းများ ဖြစ်သည်ဟု အများက ယူဆကြသည်။
မကြာသေးမီက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကလပ်အသင်း ၈ သင်းက မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ အသင်း ၁ သင်းလျှင် ပွဲစဉ် ၇ ပွဲစီ ကန်အပြီး အမှတ် အများဆုံး ရသည့် ရတနာပုံအသင်း နှင့် ရန်ကုန် အသင်းတို့ ဗိုလ်လုပွဲ တက်လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက်အသင်းသည် နာမည်ကျော် လုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကလပ်အသင်း ဖြစ်သည်။ နည်းပြချုပ်မှာ ယခင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းဖြစ်ပြီး အာဖရိက ကစားသမား (၃) ဦး ကို ငှားရမ်းထားသည်။
ရတနာပုံသည် လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒေါက်တာစိုင်းဆမ်ထွန်း၏ အသင်းဖြစ်သည်။ ရတနာပုံ၏ နည်းပြမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Mr. Yoan Girard ဖြစ်ပြီး ဘောလုံးသမားများတွင် နာမည်ကျော် ဘဏ္ဍာအခွန်ဘောလုံးအသင်းမှ ကစားသမား ၈ ဦး၊ အာဖရိကတိုက်မှ ကစားသမား ၅ ဦး ပါဝင်သည်။
ရတနာပုံ၏ အိမ်ကွင်းမှာ ဗထူးကွင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်၏ အိမ်ကွင်းမှာ အောင်ဆန်းကွင်းဖြစ်သည်။ ယခု ကန်ရမည့် သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းမှာ နှစ်သင်းလုံးအတွက် အဝေးကွင်း ဖြစ်နေသော်လည်း ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အတွက် အားသာချက် တခု ရှိနေသည်။ ဗိုလ်လုပွဲကို ရန်ကုန်ပရိသတ်ရှေ့တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ပြိုင်ဘက်အသင်းထက် ပရိတ်သတ်အားပေးမှု ပိုမို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း နိုင်မည်ဟု တာမွေမြို့နယ်မှ ဘောလုံးပွဲကြည့်သူတဦးက ထင်ကြေးပေးသည်။
“ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းက လူတွေ ပါတယ်၊ ရန်ကုန်မှာ ကန်တဲ့အတွက် ပရိသတ် အင်အား အပြည့်ရှိတဲ့အပြင် အသင်းကလည်း ကစားသမားတွေကို ဆုငွေ ကောင်းကောင်း ပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ပိုင်း အရ သူ့မှာ အားရှိပြီးသား ဖြစ်နေတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ရန်ကုန်အသင်းမှ နည်းပြချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းက ပြိုင်ဘက်အသင်း၏ ကစားဟန်မှာ ကောင်းမွန်ကြောင်း ချီးကျူးထားသည်။ “ရတနာပုံအသင်း၏ ကစားဟန်မှာ ကောင်းမွန်သော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် နည်းဗျူဟာအပိုင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိသည်” ဟု ၎င်းတို့အသင်း၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်မှ ဘောလုံးဝါသနာရှင်တဦးကမူ ရတနာပုံအသင်းလည်း နိုင်ချေရှိကြောင်း သုံးသပ်သည်။
“တခြား အသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ရတနာပုံက ပေးဂိုးအနည်းဆုံး ဖြစ်တယ်၊ ခံစစ်အား ကောင်းတယ်၊ ကစားပုံ တည်ငြိမ်တယ်။ ဒီ နေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်မှာ အမှတ် အကောင်းဆုံး အသင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ရှုံးပွဲလည်း မရှိသေးဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဥရောပဖလား ဘောလုံးပွဲ များကို လောင်းကြေး ကျပ်ငွေ အနည်းငယ်မှ ကျပ်သိန်း ရာနှင့်ချီပြီး အလောင်းအစား လုပ်ကြသော်လည်း ယခု ပြုလုပ်နေသည့် MNL CUP Grand Royal 2009 ပွဲစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး လောင်းကစားလုပ်သူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်းမှ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
“နေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်က အခုမှစတာလေ၊ လူသိ မများဘူး၊ လူကြိုက်လည်း ဥရောပပွဲစဉ်တွေလောက် မများဘူး၊ ဒါကြောင့် လောင်းတာတွေ သိပ်မရှိဘူး” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဥရောပဖလားပွဲစဉ်များ ပြန်လည်အစပြုသည့်အခါ ဘောလုံး လောင်းကစားမှုများ ပြန်လည် လှုပ်ရှားလာမည်ဟု ယူဆရကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။ ဘောလုံးလောင်းကစား၊ နှစ်လုံးထီ လောင်းကစားများက လူအများအပြားအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတခုသဖွယ် ဖြစ်နေသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“တလုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး သိထားမှ စကားပြောလို့ ကောင်းတယ်” ဟု ရန်ကုန်သား လူငယ်တဦးက ဆိုသည်။
“တလုံး” ဟူသည်မှာ ဘောလုံးပွဲ လောင်းကစားခြင်းကို ဆိုလိုပြီး၊ “နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး” ဟူသည်မှာ တရားမ၀င် ထီများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် ဒေသခံတို့က ရှင်းပြသည်။ လမ်းတွင် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် စကားပြောခြင်းမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စကားဝိုင်းအထိ ဘောလုံးပွဲအကြောင်း၊ နှစ်လုံးထီ အကြောင်း ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။
လောင်းကစား သုံးမျိုးစလုံးမှာ တရားဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသော်လည်း မြန်မာပြည် နေရာအနှံ့တွင် တွင်ကျယ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်သူများမှာ အာဏာပိုင်တို့၏ အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်း ခံနေရသော်လည်း လောင်းကစားသမားများမှာမူ နိုင်ငံရေးသမားတို့ထက် ပို၍ အသက်ရှူချောင်နေသည်ဟု ရန်ကုန်မှ စာရေးဆရာတဦးက ပြောသည်။
“ချဲထီထိုး၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းတာတွေက အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလို ဖြစ်နေတယ်။ အဖမ်းအဆီး သိပ်မရှိဘူး၊ ဖမ်းလည်း လွတ်အောင် လိုက်လို့ရနေတာပဲ” ဟု အဆိုပါ စာရေးဆရာက သုံးသပ်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားဝတ်နေရေး တနေ့ထက်တနေ့ ပိုမို ခက်ခဲ လာသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဘောလုံးပွဲလောင်းကစား၊ နှစ်လုံးထီလောင်းကစားတို့က လူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောပြသည်။
Thursday, 02 July 2009 18:05 အောင်သက်ဝိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး A (H1N1) ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံထား ရသည်ဆိုသော မိန်းကလေးကို ဝင်ရောက်မေးမြန်း သတင်းယူခဲ့သည့် Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်တဦးအား ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း ကျန်းမာရေး အသိုင်းအဝန်းမှ သတင်းရရှိသည်။
၎င်းကို ဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်မှု ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ၁၀ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထား ရမည်ဟု နေပြည်တော် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးက ဆိုသည်။
သတင်းထောက်အနေနှင့် တားမြစ်နယ်မြေကို ၀င်ရောက်ခဲ့သည့် အတွက် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၏ တာဝန် ၀တ္တရားကို နှောင့်ယှက်မှု မြောက်သောကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားမည် ဖြစ်သော်လည်း အရေးယူထောင်ချခြင်း များ မပြုလုပ်ဘဲ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးစေကာ ပြန်လွှတ်ပေးနိုင်သည်ဟု နေပြည်တော် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တဦးက ရှင်းပြသည်။
“ဝက်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ရှိ၊မရှိ ၁၀ ရက်တိတိ စောင့်ကြည့်မယ်။ ၁၀ ရက်ကြာလို့ မကူးစက် ဘူးဆိုရင် ပြန်လွှတ်ပေးမယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသဖြင့် ရန်ကုန်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အထူးသီးသန့် လူနာဆောင်တွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေသော အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ထိုမိန်းကလေးငယ်ကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက်က ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရုံဝန်ထမ်း လုံခြုံရေးအစောင့်ကို ငွေကြေးပေးကာ ၀င်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုသတင်းထောက်က မိန်းကလေးငယ်ကို ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းရယူခြင်းများ ပြုလုပ်နေစဉ် တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များ ရောက်ရှိလာရာ ချက်ချင်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ တာဝန်ကျသူနာပြု တဦးကပြောသည်။
A (H1N1) ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီးငယ်နှင့် Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားသည့် အသံဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများကိုမူ ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ မြဦးက ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဝေဒနာရှင် မိန်းကလေးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော သတင်းထောက်တွင် ရောဂါကူးစက် ခံရမှုရှိမရှိကို မြောက် ဥက္ကလာပ ဝေဘာဂီ ကူးစက်ဆေးရုံကြီးတွင် ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
ဂျာနယ်သတင်းထောက်က ဝေဒနာရှင် မိန်းကလေးကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အချိန်သည် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုသာ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြဦးနှင့် ဝေဒနာရှင် မိန်းကလေးငယ် ကို ကြီးကြပ်ကုသပေးနေသော ဆရာဝန်ကြီးများက အထူးစီမံချက်ဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ပြည်ပမှ ရောက်ရှိလာသူများကို ကျန်းမာရေးသွားရောက် စစ်ဆေးပေးနေချိန် ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရသည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်ပြီး သတင်းထောက်များ၏ ဝက်တုပ်ကွေး လူနာများနှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းမေးမြန်းမှုများကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များက ဖြေဆိုရန် ငြင်းကြသည်ဟု သတင်းဂျာနယ် အသိုင်းအဝန်းက ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး၏ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ အပါအ၀င် လူ ၁၄ ဦး၊ အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်စင်ကာပူမှ ပြန်လာစဉ် လေယာဉ် တစီးတည်း လိုက်ပါသူ ခရီးသည် ၉၀၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ထိုမိန်းကလေး ကို စစ်ဆေးခဲ့သော လေဆိပ်ဝန်ထမ်း ၉၈ ဦး နှင့် သတင်းထောက်တဦး စုစုပေါင်း ၂၀၃ ဦးကို ရောဂါကူးစက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနက အနီး ကပ် ခေါ်ယူ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ပြောင်းလဲနိုင်ဟု ရှေ့နေများပြော
Thursday, 02 July 2009 17:46 ကြည်ဝေ
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အမှုတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူမှာ မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောသာ ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီက ပြောဆိုသည့်အတွက် အမှုအခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားသည်ဟု ရှေ့နေကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
“ရဲချုပ်ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ မစ္စတာ ယက်ထောဟာ အဓိက ဆိုရင် မစ္စတာ ယက်ထောကသာ ပုဒ်မ ၂၂ ဖြစ်ရ မှာပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်တော့ပါဘူး”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်း က ပြော သည်။
ဆက်လက်ပြီး“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဥပဒေအရ အပြစ်မရှိတဲ့သူပဲ၊ အဲဒီတော့ လွှတ်ပေးရမယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့ အားလုံး မျှော်လင့်တယ်၊ အခုတရားစွဲထားတဲ့ပုံစံနဲ့ ရဲချုပ်ပြောတာနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး”ဟုလည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဓိကစွဲဆိုခံရသူ ဖြစ်နေပြီး မစ္စတာ ယက်ထော မှာ ပါဝင် ပတ်သက် သူ သာမန်တရားခံတဦးမျှသာ ဖြစ်နေသေးကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ကျွန်းတောလမ်းတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ထိုအမှုအား ရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ်ချက်များအရ မစ္စတာ ယက်ထောသည်သာလျှင် ထိုဖြစ်စဉ်၏ အဓိကအကျဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဆို သည်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ထင်ရှားသည်ဟု ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီ က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ရဲချုပ်က “မစ္စတာ ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထောသည် တည်ဆဲဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ အဓိက ပြစ်မှုကျူးလွန် ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ မ၀င်းမမတို့လည်း ထိုကိစ္စမှာ ဆက်စပ်ပတ်သက်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ယခုအခါ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲဆိုထားပါကြောင်း”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရဲ ချုပ်ပြောသကဲ့သို့ဆိုလျင် တရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ပုဒ်မ ပြောင်းလဲရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲဆိုသောအဖွဲ့အစည်းကလည်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုသူကလည်း ရဲချုပ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော်အားနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၉ တို့အရ စွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှအမည်မဖော်လိုသူ ရှေ့နေကြီးတဦးကလည်း“ဒေါ်စုကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုရဲ့ တာဝန်အရှိဆုံးသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင်က ဒီအမှုရဲ့ အဓိက တရားခံ က မစ္စတာ ယက်ထောပါလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ ဒီအမှုရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ဒေါ်စု မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ အမှုရဲ့သဘောသဘာဝ ပြောင်း သွားတယ်၊ သူပြောပုံအရဆို မစ္စတာ ယတ်ထောကို အဓိက တရားခံအဖြစ် စွဲရမှာ၊ အဲဒီလို စွဲမယ်ဆိုရင် အခု ဒေါ်စုကို စွဲထားတဲ့အမှု ရုပ်သိမ်း လိုက်ပြီးမှ ဖြစ်မယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီ၏ ပြောဆိုချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားစွဲဆိုထားသော အမှုကို ပိတ်ပြီးမှ မစ္စတာ ယက်ထောကို အမှုအသစ်အနေနှင့် စွဲဆိုမှသာ ဥပဒေနှင့်အညီမှန်ကန်မျှတမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ ရှေ့နေ ဟောင်း တဦးဖြစ်သော ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကလည်း ရှင်းပြသည်။
ပထမအမှုကို ပိတ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်တည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားသော အမှုမှာ စွဲချက်တင် ထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုအမှုမှာပါဝင်နေသော ခေါ်ခင်ခင် ၀င်း၊ မ၀င်းမမ တို့အားလုံးကို တရားသေ လွှတ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟု ဥပဒေပညာရှင်များကသုံးသပ်သည်။
ဥပဒေအရ လူတဦးအား တူညီသောပြစ်မှုတစ်ခုအတွက် နှစ်ကြိမ်အပြစ်ပေး၍မရကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ယခုအမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားသေလွှတ်ပြီးပါက ဤပြစ်မှုအတွက် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် တရားစွဲဆို၍ မရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဥပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းဥပေဒပညာရှင် များ က ပြောဆိုကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၎င်း၏ အိမ်သို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သော ဂျွန် ၀ီလျံ ယက်ထော အမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး အာဏာပိုင်များက မေလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အကျယ်ချုပ်ထားရာနေအိမ်မှ အင်းစိန် အကျဉ်း ထောင် သို့ ခေါ်ဆောင်၍ တားဆီးမိန့် ချိုးဖောက်မှုပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ကာ မေလ ၁၈ ရက် နေ့မှ စတင်၍ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ ၁၀၀၀ ခန့် အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့ခံရ
Thursday, 02 July 2009 17:32 ဧရာဝတီ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းအနီးတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာ အိမ်ခြေ ၄၀၀ခန့်ကို ဒုက္ခသည် စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ရဲတပ်ဖွဲ့များက အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့ရန်ကြိုးပမ်း နေသည်။
ယင်းအိမ်များသည် Cox’s Bazarပြည်နယ် Kutupalong Refugee Camp အပြင်တွင်ရှိပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ခန့် နေထိုင်ကြ ကြောင်း ဒါကာ အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာမဟာ မင်းကြီးရုံး UNHCRမှ တာဝန်ရှိသူ တဦး ကပြောသည်။
Arakan Protect Project (APP) အဖွဲ့မှ မှတွဲဖက် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးChris Lewa က“အာဏာပိုင်တွေက လာရောက်အခြေချ နေထိုင်သူတွေ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာမသွားဘူးဆိုရင် အရေး ယူသွားမယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ကိုက် ၁၀၀ အကွာ အဝေးတွင် နေထိုင်ကြသူများ အားလုံးသည် ရခိုင်စီမံကိန်း (Arakan Project -AP) အရ မေလတွင် စွန့်ခွာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အစိုးရက ထုတ်ဖော် ပြောကြား ထားခဲ့သည်။
UNHCR တာဝန်ရှိသူတဦးက “ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဒုက္ခသည်တွေ မဟုတ်ဘူး၊ တစုံတခု သော အကျိုးခံစားခွင့်ကြောင့် ဒုက္ခသည် စခန်းအနီးမှာ လာနေတာလို့ ထုတ်ပြောခဲ့တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြော သည်။
ကုလားတန်သတင်း ဌာနမှ အယ်ဒီတာ ကိုတင်စိုးက “မောင်းထုတ်ခံရတဲ့သူတွေက ခုချိန်ထိ အဲဒီနေရာမှာ ရှိသေးတယ်၊ တချို့ဆိုရင် အခုချိန်ထိ ပလတ်စတတ်အိတ်တွေက်ို အမိုးအကာ လုပ်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ နေတုန်းပဲ၊ အစားအသောက်နဲ့ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သလို အိမ်သာလည်း အလုံအလောက်မရှိဘူး”ဟုပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းမှ မိသားစု ၁၀၀ကျော်ခန့် သည် မကြာသေးမီက ဒုက္ခသည် စခန်း အပြင်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Cox’s Bazar ခရိုင်ရှိ ရွေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် စခန်း၂ခုတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော် လက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့် ရိုဟင်ဂျာ အကျပ်အတည်း တို့အပေါ် ၁၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စုံညီ အစည်းအဝေးတွင် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့သေးသည်။
ယင်း အစည်းအဝေးတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသာ ဖြစ်၍ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲတွင် မပါဝင်ကြောင်း မြန်မာ စစ် အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာ အများအပြားသည် မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုံးအရင်းဖြင့် ထွက်ခွာလျက် ရှိသည်။
ပင်လယ်ရေလှိုင်း အငြိမ်သက်ဆုံး ကာလဖြစ်သည့် နိုဝင်ဘာလ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမို၍ စွန့်စား ထွက်ခွာလေ့ ရှိသည်။
ရိုဟင်ဂျာများသည် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး နိုင်ငံမဲ့နေသော လူနည်းစု ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပြင်ပသို့ သွားလာခွင့်မရအောင် မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ဖိနှိပ်ထားသည်။
ယခင် ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလက ရိုဟင်ဂျာ ၁ဝဝ ကျော်သည် အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးအတွက် ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် ဖမ်းဆီးခံရသည်။ အာဏာပိုင်တို့က ၎င်းတို့ကို ထောင်ဒဏ် ၆ လ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၎င်းတို့အပေါ် ထားရှိသည့် တင်းကျပ်သော စည်းကမ်းချက် များကြောင့် စားဝတ်နေရေး ပိုမိုကျပ်တည်း လာသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ အများအပြားသည် ပွဲစားများ၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပြင်ပသို့ အရဲစွန့် ထွက်ခွာကြသည်။ အခြား နိုင်ငံများသို့ ရေလမ်းခရီးဖြင့် တရားမဝင် သွားရောက်ကြရာ အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများ သို့မဟုတ် မုန်တိုင်းထန်သည့် ကပ္ပလီ ပင်လယ်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းဇယားများအရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ရောက်ရှိလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ အရေအတွက်မှာ တနှစ်ထက်တနှစ် ပိုမိုများပြားလာသည်။ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် ၁၂၂၅ ဦးရှိပြီး ၂ဝဝ၇- ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် ၄၈၈၆ ဦးရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် တလအတွင်း တရားမဝင် ရောက်ရှိလာသော ရိုဟင်ဂျာများကို ဖမ်းဆီးရမိမှု ၈ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်းမှာ ၆၅၉ ဦး ဖြစ်သည်။
ိဝက်တုပ်ကွေး ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူများ အစိူးရသတင်းထုတ်ပြန်သည်ထက် ပိုမိုများပြားမည်ဟု စာနယ်ဇင်းဆရာတို့ ခန့်မှန်း
July 2, 2009 · LeaveaComment
၂ ဇူလိုင် ရန်ကုန်၊ ၊ဟိန်းခိုင်ထွန်း
Swine Flu Outbreak and Blackout at Burma.
UNICEF မှမြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ခြောက်မျက်နှာပါ A(H1N1) ကပ်ရောဂါ သတိပေး နှိုးဆော်ချက် နှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ
စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည့် မီဒီယာများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ခေါ် A(H1N1)ကပ်ရောဂါ ပိုးကူးစက်သူ စင်္ကာပူပြန် ၁၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သာ ရှိသည် ဟု တရားဝင်ကြေညာ ထားသော် အကြားအမြင်များသော မြန်မာ စာနယ်ဇင်း ဆရာတို့ က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသော ပမာဏ ထက် ပိုမည် ဟု ခန့် မှန်းပြောဆိုကြသည်။
ဇွန်လ ၂ရ ရက် နေ့ ညကမြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ရောဂါကူးစက်ခြင်းခံထားရသူ စင်္ကာပူ ပြန် ၁၃ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး ငယ်လေး တစ်ဦးရှိသည် ဟု ကြေညာခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ရောဂါကူးစက် ထားခြင်းခံရသူ အမျိုးသမီး နှင့် လေယာဉ် တစ်စီးတည်း စီးလာခဲ့သည် ခရီးသည် ၉၀ ဦးအပါအ၀င် လေဆိပ်ဝန်ထမ်း နှင့် စုစုပေါင်း၂၀၃ ဦးကို ရောဂကူးစက်ခံထားရခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ် စစ်ဆေးနေ ဆဲဖြစ်သည်ဟု ကြေညာထားသည်။
၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူများမှာ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် စစ်အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန် ထားသော တစ်ယောင်ထက်မက ရှိ နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းဆရာ တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။ပြည် တွင်းဝက် တုပ်ကွေး သတင်းအမှောင် ချမှု နှင့် ပတ် သက်၍ စာနယ် ဇင်းဆရာ တစ်ဦးက “ဒီ့ထက် မက ရောဂါကူး စက်ခံထားရတဲ့ သူတွေ ရှိ နိုင်တယ် ။သူတို့ ကိုယ် တိုင် မသိတာ လည်း ဖြစ် နိုင်တယ်။သိပြီးတော့ သတင်းမထုတ် ပြန် တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ကြည့်လေ အခုဆို ဘယ်သတင်း ထောက်ကိုမှ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး နဲ့ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကြီးကို မှမကပ် ခိုင်းဘူး” ဟုပြောသည်။
ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးရှိ အလုပ်သင် ဆရာဝန် တစ်ဦးက လည်း ရန်ကုန် မှာ ရောဂါပိုးတွေ့ တဲ့ လူနာဆို တော် သေးတယ် ။နယ်တွေ မှာ ဖြစ်နေ တဲ့ လူနာတွေ ဆိုဘယ်သူမှ သိမှာမဟုတ် ဘူး။နောက်ကြားရတဲ့ သတင်းတွေ က နယ်မှာ ၀က်တုပ်ကွေးတွေ ရင် အာဏာပိုင် တွေ က ဖမ်းပြီးသတ်ပစ် တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လည်း ထွက် နေတယ် ”ဟုပြောသည်။
၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်ခံရမည် ဆိုးသဖြင့် ရောဂါ ကာကွယ်ရေးမျက် နှာဖုံးဝတ်ဆင် သူများကို လည်း လုံခြုံရေးအဖွဲ့ ဝင်များက ဖယ်ရှားခိုင်းသည် ဟု ရန်ကုန် မြို့ ခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကူးစက်ခံ ထားရသည့် မိန်းကလေး ငယ်အား သွားရောက် သတင်းယူသူ Weekly Eleven ဂျာနယ် မှ သတင်းထောက် တစ်ဦးမှာ ဖမ်းဆီးးထိန်းသိမ်း ခံထားရသည်။
ထို သတင်းထောက် ကို ရောဂါ ရှိမရှိ ဆယ်ရက် စောင့်ကြည့်ပြီး နောက် ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဟု ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဦးက ပြောသည်။ပြည်တွင်း သတင်းထောက် များမှ ၀က်တုပ်
ကွေးသတင်း ကို အတားအဆီး အနှောင့် အယှက် မရှိပဲ ရရှိဖို့ အလှမ်းဝေနေ ဆဲဖြစ်သည်။
0က်တုပ်ကွေးရောဂါ အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး နှင့်
ဝေဘာဂီ ကူးစက်ရောဂါ ကု ဆေးရုံ တို့ အပြင် SSC ဆေးရုံ နှင့် အာရှတော်ဝန် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံးများ ကလည်း ပူးဆောင်ရွက် မှု ပေးသည် ဟုသတင်းရရှိသည်။
၀က်တုပ်ကွေး ကူးဆက်ခံထားရသူများ အတွက် Tamiflu ဟုခေါ်သည့်ဆေးဝါး ကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ကြီးကသာ ထုတ်ဝေပေးသည်။
အန်န်အယ်လ်ဒီ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဘန်ကီမွန်း တွေ့မည်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) မနက်ဖြန် မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်တဲ့အခါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀ ခုတို့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့လို့ရမယ်၊ မရဘူး ဆိုတာကတော့ ခုချိန်ထိ မရေရာသေးပါဘူး။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး အပါအ၀င် အချက် ၃ ချက်ကို အဓိကထားပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ မနက်ဖြန် မနက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက် အကြောင်းကြားထားတယ် ဆိုတာကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက NLD စီအီးစီနဲ့တွေ့မယ်လို့ အကြောင်းကြားစာ ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း တွေ့မှာပါ။ တွေ့တဲ့အခါ ဘာတွေဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒါ စီအီးစီပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာ။ အချိန်နဲ့နေရာ မသိရသေးပါဘူး။”
တွေ့ဆုံမယ့်အထဲမှာ NLD အပြင် တခြားနိုင်ငံရေးပါတီ ၉ ခုလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပါတီတခုကတော့ တစညလို့ ခေါ်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီပါ။ တစညရဲ့ တွဲဘက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁ ဦးခင်မောင်ကြီးက သူတို့ သွားတွေ့မယ့်အကြောင်း အတည်ပြုပြောပါတယ်။
“ဟုတ်တယ်၊ ဒီနေ့သွားမှာ ကျနော်တို့။ တွေ့ရမှာ မနက်ဖြန် မနက်။ ပါတီတခုကို ၅ ယောက် ဖိတ်တယ်လေ။ ၅ ယောက် သွားကြမှာပါ။ ကျနော်က ခေါင်းဆောင်သွားမှာပါ။ ကျန်တဲ့ ၄ ယောက်ကတော့ လူငယ်တွေပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်း တက်လာတဲ့ လူငယ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။”
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုစာတစောင်ကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ကမှ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ UNA ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတော့ တွေ့ရမယ့်အထဲမှာ မပါဘူးလို့ UNA အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျင့်ရှင်းထန်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ကတော့ တွေ့ရမယ့်ထဲမှာ ပါပြီး SNLD နဲ့ UNA ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုင်းစောအောင်နဲ့ တခြားခေါင်းဆောင်တယောက် သွားတွေ့မယ့်အကြောင်း SNLD အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်က ပြောပါတယ်။
“အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ၂ ယောက်၊ ဦးစိုင်းစောအောင်နဲ့ ဦးစိုင်းရွှေဂျူး၊ အရင်အပတ်ကလည်း SNLD က ၃ ယောက်ပဲ တက်ခွင့်ရတယ်။ ဒီတခေါက်ကြတော့လည်း ၂ စောင်ပဲ လာပေးပါတယ်။”
ဦးခင်မောင်ကြီးက ပါတီတခုကို ၅ ယောက် တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် SNLD အဖွဲ့ကတော့ ၂ ယောက်ပဲ တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။ SNLD အဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒုတိယ အမတ်နေရာ အများဆုံး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးခွန်ထွန်းဦးဟာ ပူတာအိုထောင်မှာ နှစ်ရှည် အကျဉ်းကျနေပါတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ ဒီခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်ကြသူတွေက များပြီး အဓိကကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီခရီးစဉ်ကို သူတို့အကျိုးအတွက် ခုတုံးလုပ် အသုံးချသွားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ရှိနေကြတာပါ။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ကိုင်တိုင်ကလည်း သတိကြီးကြီးထားပြီး လုပ်နေပုံရတယ်ဆိုတာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်တဲ့အချိန် သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေက ပြနေပါတယ်။ သူ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်မယ့် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်၊ သောကြာနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုအတွက် ရုံးချိန်းပြန်ပေးထားတဲ့နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် အဲဒီနေ့မှာမှ သူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာ သံတမန်ရေးအရ စွန့်စားမှုများပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အချိန်အခါ ရွေးချယ်ရတာကလည်း စိန်ခေါ်မှုတခုပါပဲလို့ မစ္စတာဘန်က အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်နေတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုနီးပါး ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် တိုးတက်မှုတွေ သိသိသာသာ မရသေးတာကြောင့် ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂဟာ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလက နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးချိန်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြင်ပအကူအညီတွေ လက်ခံဖို့ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ချိန် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ပြည်ပအကူအညီတွေကို ဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းတယောက် မျက်နှာပန်း လှခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတကြိမ်က ပထမတကြိမ်နဲ့မတူဘဲ အကဲဆတ်လှတဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးပြောဆိုရမှာမို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် သက်တမ်း ထက်ဝက်နီးပါး ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအတွက် အတော့်ကို သတိထားရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေမှာပါပဲ။ သူကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးပါဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲ မရောက်ခင်ကတည်းကိုက မြန်မာစစ်အစိုးရကို တဖွဖွ တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကတော့ မစ္စတာဘန်ရဲ့ ခရီးစဉ်အပေါ် အကောင်းမြင်သဘော သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အခုတခေါက်လည်း ပထမတခေါက်လိုပဲ တခုခုရခဲ့ရင်တော့ နှစ်ဖက်လုံးအတွက် ကောင်းမှာပါလို့ မြင်သူက တစညပါတီရဲ့ တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁ ဦးခင်မောင်ကြီးပါ။
“ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဟိုတခါလည်း သူ လာသွားပြီးပြီလေ။ အရင်တခါ လာသွားတုန်းကလည်း ဘာပဲပြောပြော သူ Break Through လေး ရသွားတာပေါ့။ အခုတခေါက်လာတော့လည်း Break Through လေး ရရင်တော့ သူ့အတွက် ကောင်းတာပေါ့။ နောက် ကျနော်တို့အတွက်လည်း ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ကောင်းတာပေါ့။ ကျနော်တို့က ဘာပဲပြောပြော UN လို အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Co-operate လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး ကောင်းသွားတာပေါ့။”
လက်ရှိမှာတော့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံကို ရောက်နေပြီး စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်း (Lee Hsien Loong)၊ ၀ါရင့်ဝန်ကြီး ဂိုချောက်တောင် (Goh Chok Tong) တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါ မြန်မာ့အရေး ပြောဆိုကြမလား ဆိုတာကတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။ မစ္စတာ ဂိုချောက်တောင်ဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ သောကြာနေ့မနက်မှာ စင်ကာပူကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး ၂ ရက်နီးပါးကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆက်တိုက်လို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ရမယ့်ပုံ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ကို စနေနေ့ညမှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီး ဘန်ကောက်၊ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်မှာ အဲဒီနေ့ည ၁၀ နာရီပတ်ဝန်းကျင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဘန်ကောက်၊ ကုလသမဂ္ဂ သတင်းပြန်ကြားရေးရုံးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
ဂျကာတာမြို့ ဗြိတိန်သံရုံး ဒေါ်စုကို ဂုဏ်ပြု
ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၀၉။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံး အဆောက်အဦးနံရံ အပြင်ဘက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကို ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ညနေကစပြီး ဆလိုက်ထိုး ပြသထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထွန်းကားရေးအတွက် ထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံး အဆောက်အဦးကြီးရဲ့ အပြင်နံရံအပေါ် အများမြင်နိုင်အောင် ညအချိန်တွေမှာ ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့ကစပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ညအထိ ဆလိုက်ထိုး ပြသထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံးတွေမှာ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပထ၀ီအနေအထားအရ နီးစပ်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဦးစားပေး ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗြိတိသျှသံရုံး ပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး မစ္စ ဖာယေး ဘဲလ်နစ္စ (Ms. Faye Belnis) က ဗီအိုအေကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို အခုလို ဆလိုက်ထိုး ပြရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေ စောင့်ထိန်းလိုက်နာမှု၊ လွတ်လပ်မှု စတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျမတို့က ထောက်ခံပြသတဲ့အနေနဲ့ လုပ်လိုက်တာပါ။”
အခု ဆလိုက်ထိုးပြသမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံဟာ အကျဉ်းထောင် သံတိုင်တွေအတွင်းက အပြင်ကို လှမ်းကြည့်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ အဲဒီပုံဘေးမှာတော့ “အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပါစေ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်ဘာသာစလုံးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတမ်းလည်း ပါပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကို ဘာကြောင့် အခုလို ပြသရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း မစ္စ ဖာယေးကပဲ ဆက်ပြီးတော့…
“ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဘာကြောင့် အခုလို လုပ်ရသလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးကြီး ဖြစ်ရပ်ကြီး ၂ ခုကြောင့်ပါ။ တခုကတော့ မနက်ဖြန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကို ပြန်လည်ကြားနာမယ့် ဖြစ်ရပ်နဲ့ နောက်တခုကတော့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း (Mr. Ban Ki-moon) မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်မယ့် အချိန်တွေနဲ့ ကိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။”
ဗြိတိသျှသံရံးတွေမှာ အခုလို လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထွန်းကားရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန် ဘရောင်း (Gordon Brown) ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်လှုပ်ရှားတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့နဲ့ အချိန်ကိုက်ပြီးတော့လည်း ၀န်ကြီးချုပ်က ဒေါ်စုအတွက် ၆၄ ဆိုတဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်ကို စတင်တည်ထောင်ဖို့ကိုလည်း ထောက်ခံအားပေးခဲ့သူပါ။ ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံးတွေ အနေနဲ့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထောက်ခံ အားပေးကြဖို့၊ သံရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ဒီကိစ္စကို ဖော်ပြကြဖို့ ကိုယ်တိုင် အထူးအာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ သံရုံးဟာ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို အပြည့်အ၀ စတင် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ သံရုံး ဖြစ်လာတာပါ။”
အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှသံရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကိုမှ တမင်ရွေးချယ် ပြသရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၁၈ ရာစုနှစ်တုန်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးတွေကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် အေ.အာ.ကာရ်တီးနီး (A. R. Kartini) ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကာရ်တီးနီးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ သူတော်စင်တယောက်လို လေးစား ကြည်ညိုခံရသူ တဦးဖြစ်ပြီးတော့ ကာရ်တီးနီးရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ “အမှောင်ထုရဲ့ တဖက်ကမ်းမှာ အလင်းရောင်ဆိုတာ ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့အညီ ကာရ်တီးနီးလိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုတွေကို အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်လာစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလို ပြသတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရုပ်ပုံကို အခုလို ဆလိုက်ထိုး ပြသတဲ့အတွက် အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်တွေက ကန့်ကွက်တားဆီးတာ မရှိသလို ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကူညီကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက တာတိုပစ် ဒုံးလက်နက် စမ်းသပ်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက တာတိုပစ်ဒုံးပျံ ၃ စင်းကို ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်လိုက်တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းက ၀န်ဆန်းမြို့အနီးမှာ မြေပြင်က ရေပြင်ပစ် ဒုံးပျံ ၂ စင်းကို မိနစ် ၄၀ အတွင်း ပစ်လွှတ်လိုက်တာလို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောလိုက်တာပါ။
အဲဒီနောက် နာရီအနည်းငယ် အကြာမှာ နောက်ထပ် ဒုံးပျံတစင်းကို ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မေလ ၂၅ ရက်နေ့က နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ ဒုံးပျံပစ်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုရီယားကျွန်းဆွယ်မှာ တင်းမာမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့ အထဲက နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ပါ။ ဒီလို နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုနဲ့ ဒုံးပျံပစ်လွှတ်မှုတွေကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ပြင်းထန်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေကိုလည်း ချမှတ်ထားတာပါ။
တောင်ကိုရီးယား သတင်းစာတစောင်ဖြစ်တဲ့ ဂျွန် အန်ဂ် အီလ်ဘိုးကတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက သူ့ရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် စစ်စခန်းတွေကနေ နောက်ထပ် တာတိုနဲ့ တာလတ်ပစ် ဒုံးပျံတွေကို ပစ်လွှတ်ဖွယ်ရာ ရှိနေသေးတယ်လို့လည်း ဒီကနေ့ပဲ ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက သူ့ရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတချို့မှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် အဲဒီဒေသက သင်္ဘောတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့ သတိပေးချက်တရပ်လည်း ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။
ဒီအတောအတွင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အကူအညီပေးနေတဲ့ စက်မှုဇုန်နယ်မြေကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂ နိုင်ငံကြား နောက်ဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ သဘောတူညီချက် တစုံတရာမရဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက မစ်ဇိုင်းဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှုတွေ ထပ်ပြီးလုပ်လာမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေများနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဒီလကုန်ပိုင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း သင်္ဘော အသွားအလာတွေ ကင်းရှင်းအောင်နေကြဖို့ မြောက်ကိုရီးယားက သတိပေးချက် ထုတ်ထားတယ်လို့ ဂျပန်ကမ်းခြေ လုံခြုံရေးက ပြောပါတယ်။ ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ ပင်လယ်ဝါ တ၀ိုက်က ကမ်းခြေဆယ်ခုမှာ အသွားအလာ လုပ်နေတဲ့သင်္ဘောတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သတိပေးထားတဲ့ အီးမေးတစောင်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုံးကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ဂျပန်ကမ်းခြေ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေက ပြောတာပါ။ စောစောပိုင်းတုန်း ရထားတဲ့ သတိပေးချက် တခုမှာတော့ ဂျပန်ပင်လယ်တ၀ိုက်မှာ ဇွန်လ ၂၅ရက်ကနေ ဇူလိုင် ၁၀ရက်အထိ သင်္ဘောတွေ အသွားအလာ မလုပ်ဖို့ ဆိုထားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ဘယ်လို စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ စီစဉ်နေတာလဲဆိုတာ သေသေချာချာ မသိရဘူးလို့ ဂျပန်အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က မစ်ဇိုင်းဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မယ့် အရိပ်လက္ခဏာတွေ မတွေ့ရဘူးလို့ အမေရိကန်ရေတပ်အရာရှိ မိုက်ကလ် မူလင်က မနေ့တုန်းက ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ သူ့ရဲ့သင်္ဘောတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကပဲ နှောက်ယှက်နှောက်ယှက် စစ်ရေးနဲ့ တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ မနေ့ကပဲ သတိပေး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သံသယရှိတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခွင့်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂဘက်က ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ် ချမှတ်ရေး ကိစ္စ အခု ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တာရိုအာဆိုတို့ တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသေးတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်နဲ့ မစ်ဇိုင်းဒုံးကျည် လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လာမှာကို ဟန့်တားဖို့အရေး ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ကိစ္စဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံးက အရေးတကြီး ၀ိုင်းလုပ်ရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောဟာ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကို ပြန်လှည့်သွားပုံရတယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိတွေက အင်္ဂါနေ့တုန်းက ပြောပါတယ်။ အဲဒီသင်္ဘောကို အမေရိကန် ရေတပ် သင်္ဘောက တပတ်ကျော်ကြာအောင် နောက်ယောင်ခံလိုက်နေခဲ့တာပါ။
ဘန်ကီမွန်းခရီးစဉ် စစ်အစိုးရ အသုံးချနိုင်
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တရားဝင်မှုရဖို့ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှုရဖို့ အသုံးချသွားနိုင်တယ်လို့ Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့ကြီးက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်တမ်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု တွေ ဖြစ်လာစေဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှုး Kenneth Roth က ပြောထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေအကြား စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းပေးနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ ဘာမှ ရလဒ်မထွက်ခဲ့ဘူး။ အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်း Human Rights Watch က ပြောပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ အချိန်ဆွဲနေတာတွေ လှည့်စားနေတာတွေ ရပ်တံ့ဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့လည်း ဒီအဖွဲ့က တိုက်တွန်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အထီးကျန်ဖြစ်နေတာကို အဆုံးသတ်ဖို့ မစ္စတာ ဘန် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံ တခု ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟာ အခု ဂျပန်ရောက်နေပြီး သောကြာနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိမှာပါ။ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တောင်းဆို ထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြန်စဖို့နဲ့ လာမယ့်၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို အများက လက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးဖို့အတွက် အတွင်းရေးမှုးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှု နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကိုလည်း အဲဒီသောကြာနေ့မှာ ရုံးချိန်းထားပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၀၉စစ်ဝတ်စုံပေါ်တွင် အဖြူရောင် အုပ်ထားသော ၀တ်စုံဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ဓာတ်ပုံကို ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အခြားသော စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ပူးတွဲ ရိုက်ကူးထားသော်လည်း ၎င်းတဦးတည်းသာ အဖြူရောင် အ၀တ်စ ပါရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အ၀တ်စမှာ မည်သည့်အ၀တ်စ ဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက် အသုံးပြုသည်ကို မသိရပေ။ ( ဓာတ်ပုံများ - SPDC )
တုပ်ကွေးရောဂါသည်များ အပြင်ဆေးခန်းနဲ့ ဆေးရုံက လက်မခံတော့
ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၀၉
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက အထူးကု ဆေးခန်းများတွင် တုပ်ကွေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လူနာများကို လက်ခံ ကုသပေးခြင်း မပြုတော့ဘဲ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့် ဝေဘာဂီ ကူးစက် ဆေးရုံကြီးများသို့ သွားရောက် ကုသခိုင်းနေသည်။
“သာမန် တုပ်ကွေးပဲဖြစ်ဖြစ် A/ H1N1 ပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးကု ဆေးခန်းတွေက လက်မခံချင်ကြဘူး။ ဒီ ၃၊ ၄ ရက် မှပါ။ အဖျား တအားကြီးတဲ့ လူနာဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ ဆေးရုံကြီးကိုပဲ လွှတ်တော့တာပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ A/ H1N1 နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အထူးကု ဆေးခန်းများကို တုပ်ကွေးရောဂါလူနာများ လာရောက် ကုသလျှင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ရမည်ဟု မှာကြားထားခြင်း မရှိကြောင်း နေပြည်တော် ဗဟို ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဌာန မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်လာသော အသက် ၁၃နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးလေး တစ်ဦးတွင် A/H1N1 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံနေရကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာတွင် ဇွန်လ ၂၇ရက် နေ့က သတင်း ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိက အထူးကု ဆေးခန်းများ အနေဖြင့် လေထဲမှ အလျင်အမြန် ကူးစက်လွယ်သော ရောဂါပိုးကို ကုသမှု မပြုလုပ်နိုင်၍ ယင်းဆေးခန်းများတွင် လက်ခံ ကုသပေးခြင်း မပြုတော့ဟု ဆိုကြသည်။
မိုးတွင်းကာလတွင် ဖြစ်တက်သော တုပ်ကွေးများကြောင့် နှာစေးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စသော လက္ခဏာများ အပြင် အဖျားကြီးပြီး အပူချိန် မြင့်တက်လာသော လူနာများ အထူးကု ဆေးခန်းများသို့ လာရောက် ပြသလျှင် ယင်းဆေးခန်းရှိ ဆရာဝန်များက လက်ခံ ကုသပေးခြင်း မရှိတော့ဘဲ ရောဂါပိုး အခြားလူများသို့ ကူးစက်မှု မရှိစေရန်နှင့် ရောဂါ ပိုမို မပြင်းထန်စေရန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက် ကုသရန် ညွှန်ကြားမှုများ အဆိုပါ အထူးကု ဆေးရုံများက ပြုလုပ်နေသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ ပုဂ္ဂလိက အထူးကု ဆေးရုံကြီးများဖြစ်သော SSC ၊ ပင်လုံ နှင့် ရွှေဂုံတိုင် ဆေးရုံကြီးများတွင် သာမန် တုပ်ကွေးများကို လက်ခံ ကုသပေးနေပြီး သာမန်တုပ်ကွေးထက် ပြင်းထန်သော ရောဂါ ရှိနေလျင် လက်ခံ ကုသပေးခြင်း မရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လူနာများကို အောင်ဇေ အထူးကုဆေးခန်း၊ ပါရဂူ အထူးကုဆေးခန်း၊ မဟာမြိုင် အထူးကုဆေးခန်းနှင့် မိုးသီး အထူးကုဆေးခန်းများတွင် လက်ခံ ကုသပေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များရှိ ဆေးခန်းငယ်လေးများသည် တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်သော လူနာများကို လက်ခံ ကုသပေးနေသေးသည်ဟု အင်းစိန်မြို့ခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
၂၀၀၉ ခုနစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ မက္ကဆီကို နိုင်ငံတွင် စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော A/H1N1ရောဂါပိုးသည် လက်ရှိတွင် နှိင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ကူးစက်ခံနေရကာ ကူးစက်ခံရသူ ၇၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၃၀၀ ကျော် ရှိနေသည်။
ရေတပ် အကောက်ဂိတ် ငွေ (၇)သိန်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိက လက်သို့ လွဲပြောင်း
တာကလူး (နိရဉ္စရာ) ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ အခြေစိုက် ဗျူဟာ (၃) ရေတပ် စခန်းမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော အကောက်ဂိတ်ကို ငွေ (၇)သိန်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိက လက်သို့ ၂၀၀၉-၁၀ ခုနှစ်အတွက် လွဲပြောင်း လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အကောက်ဂိတ်မှာ တောင်ကုတ်မြို့နှင့် ကျောက်ဖြူမြို့ အကြား ပြေးဆွဲနေသည့် စက်လှေလိုင်းများထံမှ ငွေကြေး ကောက်ခံနေသော တရားမ၀င် အကောက်ဂိတ် ဖြစ်ပြီး ဗျူဟာ (၃) ဂိတ်ဟု လူသိများသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ တောင်ကုတ်မြို့မှ လူငယ် တဦးက “အဲဒီ အကောက်ဂိတ်ကို ကျပ်ငွေ ၇ သိန်းနဲ့ လမု-မော်ရွာ ရဲစခန်းမှူး သူရထွန်းတင် နှင့် မော်ရွာ ရယက ဥက္ကဌ အုန်းဖေ တို့ကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး တစ်ဦးပိုင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အကောက် ကောက်ခွင့် ပေးလိုက် ပါတယ်။ အဲသလို ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အကောက်ခွန်က ယခင်ကထက် နှစ်ဆ ပိုကောက်လာတဲ့အတွက် ခရီးသွားပြည်သူတွေက အထူး ဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တောင်ကုတ် မြို့နယ်မှ စက်လှေပိုင်ရှင်တစ်ဦးကလည်း ခရီးသွားပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်နေပုံကို ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“သူတို့က ဈေးသွားဈေးလာ ခရီးသွားပြည်သူတွေ ဆီကနေ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အပေါ်မှာ ငွေ မတရား ကောက်ခံ နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက တရားဝင် ဖွင့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို ရေတပ်သားတွေက လာသမျှ စက်လှေတွေမှာ ပါလာတဲ့ ခရီးသွားတွေရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အပေါ်မှာ ငွေကောက်ခံ နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်လှေတွေက တရားဝင် အစိုးရဆီမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့က ငွေကောက်လို့ မရတော့ ခရီးသည်တွေဆီက သူတို့ ကောက်တာပါဘဲ။ ခရီးသွားတွေကတော့ ခရီးစရိတ် မတတ်နိုင်တဲ့ အထဲ အာဏာပိုင်တွေက မတရား ငွေကောက် နေတော့ အထူး ဒုက္ခဖြစ်နေကြရပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အကောက် ကောက်ပိုင်ခွင့်ရထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် များသည် ရေနံတစည် ကို ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ဆန်တစ်အိတ်ကို ၅၀၀ ကျပ်နှင့် သယ်ယူလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အပေါ် မူတည်ပြီး ၁၀၀ မှ ၃၀၀ ကျပ်အထိ ကောက်ခံနေပြီး အကောက်ခွန် မပေးပါက သယ်ယူလာသော ကုန်စည်များကို သိမ်းယူလေ့ရှိသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ်ရှိ သိမ်ကျောင်းပြင်၊ အောင်ဆိပ်ပြင်၊ အင်းတိုင်ကြီး၊ ကျောက်ဝေ၊ ရန်ဒေ၊ ကျောက်ကိုင်း၊ ငှက်ပျော တော၊ ပုချေမော်၊ လိပ်ကုန်ဘောင်၊ ချောင်းနားကြီး စသည့် ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများမှာ ကျောက်ဖြူမြို့သို့ စက်လှေများဖြင့် ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် သွားလေ့ရှိကြပြီး ထိုသို့ သွားရောက်စဉ် အကောက်ခွန် များကို မတရား ပေးဆောင် နေရခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းပြင် အိမ်အတွက် ဈေးသွားဝယ်တဲ့ ဆန်တစ်အိတ်၊ ငရုတ်သီး တစ်ပိဿာ၊ ကြက်သွန် တစ်ပိဿာက အစ ဓါးပြတိုက်သလို လိုက်ကောက်နေသည်ဟုလည်း ကျေးရွာသား တဦးကပြောသည်။
၄င်းအပြင် ကုန်တင်လာသည့် သဗ္ဗာန်များနှင့် ငါးဖမ်း စက်လှေများမှလည်း အကြီး အငယ် အလိုက် ကျပ် ၅၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ထိကောက်ခံနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ရေတပ်၊ စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များမှ လူသွား လူလာများသော ရေကြောင်းလမ်းများတွင် တရားမ၀င် အကောက်ဂိတ်များဖွင့်လှစ်ပြီး ရခိုင်လူထုထံမှ ယခုကဲ့သို့ ငွေများ မတရားကောက်ခံနေသည်ဟု သိရသည်။
Kaowao ဇူလိုင် ၁၊၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၁)။ ။ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ညက ဘုရားသုံးဆူမြို့၌ လက်ပစ်ဗုံး ၂ လုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ယနေ့အထိ ဒေသအာဏာပိုင်များက မည်သူမည်ဝါဟု လက်သည်မဖေါ်နိုင်(သို့မဟုတ်) ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြရပြီး လုံခြုံရေး အစီအမံသစ်တစ်ရပ်သာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး နောက်တစ်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဒေသအတွင်းလှုပ်ရှားနေကြသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လက်နက်ချ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကို ခလရ ၃၂ တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဇော် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ၍ သူ၏အမိန့်ကို နာခံ စေရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
“ သူပြောက သေနတ်ဒင်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အလံတဆိပ်အမှတ်အသားတွေ ရေးထားရမယ်တဲ့၊ လွယ်တဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပဲ၊ ဘယ်အဖွဲ့ကမှ လိုက်နာကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်၊ သူကတပ်ရင်းမှူး တစ်ယောက်
ပဲ၊ သူတပ်ကိုပဲဒီလိုအမိန့်ပေးလို့ရမယ်” ဟု KPF မှအမည်မဖေါ်လိုသော အရာရှိတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း ချက်အရ သိရသည်။
ဘုရားသုံဆူမြို့ပေါ်တွင် ရပ်ကွက် ၄ ရပ်ကွက်ရှိရာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး နံပါတ်ပြား၌ သက်ဆိုရာ ရပ်ကွက်အမှတ်ကို ထင်ရှားစွာရေးသားထားရမည်ဟု ဆိုသဖြင့်မြို့ခံများ ပြုလုပ်ပေးကြရပြီဖြစ်သည်။
ညပိုင်းတွင်များလည်း ပြည်သူ့စစ်များကိုအကူပေးရန် တစ်ရပ်ကွက်လျှင် ယောက်ျား ၁၀ ဦးကျ လုံခြုံရေး လိုက်ပါ ပေးရမည်။ အတည်မပြုနိုင်သောသတင်းတစ်ရပ်တွင် မြို့ခံများမှ ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် အတင်းဝင်ရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်စေမည့် အစီအမံများရှိနေသည်ဟု သတင်းများပြန့်နှံ့နေသည်။
သုံးဆူမြို့ပေါ်မှ ငြိမ်းအဖွဲ့ဝင် အရာရှိတစ်ဦးက “ဒီဗုံးကဗမာစစ်တပ်ကဗုံးပဲ၊ ရှာတွေ့တဲ့ လက်ပစ်ဗုံးကလစ်တံကွင်း
က M-99 နာနတ်သီးဗုံးပဲ၊ ဒီဗုံးအမျိုးအစားက ဗမာစစ်တပ်မှာပဲ သုံးကြတာ၊ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချင်လို့ အခုလိုအကွက်ထွင်တာပဲဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက ကြိုမြင်နေကြတာပဲ” ဟုဆိုသည်။
အကဲခတ်သူများအဆိုအရ အကယ်၍ KNU မှဖေါက်ခွဲမည်ဆိုလျှင် မြို့တွင်းအထိရောက်လာပြီး လေထဲ
အလာဟသ ဗုံးဖေါက်ပစ်ခွဲအလုပ် လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တွက်ဆပြသည်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချူပ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အောင်မြင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးဟု AAPPB ပြော
Thu 02 Jul 2009, အာကာ၊ မင်းအာသံ
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ်၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာ အောင်မြင်မှုရရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) AAPPB က ပြောသည်။
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ် အချိန်တိုတောင်းလွန်းခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဟူသော စစ်အစိုးရမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
“ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ ဘန်ကီမွန်းဟာ သန်းရွှေနဲ့ တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက ဖမ်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ဘူး၊ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လို့ ဖမ်းထားတာလို့ အမြဲပြောနေတယ်။ နောက်တချက်က အချိန်တိုအတွင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွဟ်ဘူး၊ တွေ့ခွင့်ရှိဦးတော့ ဘယ်လောက်လွတ် လွတ်လပ်ပ်တွေ့နိုင်မလဲ။ ဒါကြောင့် ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီးစဉ် အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်တယ်” ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)၏ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က ပြောသည်။
၄င်းပြင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံအင်အားစုများအကြား မည့်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။
သို့သော် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း၏ခရီးစဉ်ကို ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချူပ်၏ အဓိကထားဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အချက် (၃) ချက်ကို မူအားဖြင့် ထောက်ခံကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချူပ်၏ အဓိကထားဆောင်းရွက်နိုင်မည့် အချက် (၃) ချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရန်၊ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ အင်အားစုများအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြန်လည်စတင်ရန်နှင့် စစ်မှန်ပြီးတရားမျှတမှုရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရန်တို့ ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချူပ်ရုံးတွင် ကျင်းပသော နေ့စဉ်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် မနက်ဖြန် သောကြာနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့နှင့် ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ ရက်ကြာ အလည်အပတ် သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတို့ပူးပေါင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှ လက်မှတ်ပေါင်း ၆ သိန်း ၅ သောင်းကျော် လက်ခံရရှိထားကြောင်း လှုပ်ရှားမှုကော်မတီက ကြောငြာခဲ့သည်။
ထိုလှုပ်ရှားမှုမှ ရရှိထားသည့် လက်မှတ်များကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချူပ်ထံ ပေးပို့ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
AAPPB ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂၁၅၅) ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းမှာ တုပ်ကွေးနဲ့သေတာ ၅ ယောက်ရှိပြီ
ကူးစက်သူအရေအတွက် ၅၉ ယောက်ကနေ ၁၄၇၃ ယောက်ထိ ခုန်တက်
post by Thursday, July 02, 2009
ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၀၉ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ A (H1N1) ဗိုင်းရပ်အမျိုးအစား တုပ်ကွေးနဲ့သေတဲ့သူ ၅ ယောက် ရှိသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါပြီ။
တနေ့တုန်းက ကူးစက်သူ ၅၉ ယောက်ကနေ ၁၄၇၃ယောက်ထိ တိုးလာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က ဘန်ကောက်မှာကျင်းပတဲ့ ကိုရီးယား လူငယ်အဖွဲ့ ကပွဲကိုသွားခဲ့တဲ့ အူဘွန်ရတ်ချာထနီက အသက် ၁၄ နှစ်ရွယ် ကျောင်းသူတဦးလည်းပါ,ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကျောင်းဖြစ်တဲ့ မြောက်ပိုင်းပြည် နယ်က ဘင်ဂျမာမဟာရတ်ကျောင်းအပါအ၀င် ကျောင်း ၅ ကျောင်းကို ပိတ်ထား ရပါတယ်။
စတုတ္ထမြောက်သေတဲ့ကလေးကတော့ ချုံဘူရီပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီး တနေ့တုန်းက
သေသွားတာပါ။ အသက် ၁၅ နှစ်ရွယ် ကျောင်းသူလေးပါ။ ဒီမိန်းကလေးမှာသွေး ဖြူဥကလာပ်စည်းတွေနည်းပြီး ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဦးနှောက် အကျိတ် ခွဲစိတ်ကုသမှုလည်း ခံထားရသူလေးပါလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Wittha-
More fatalities from the A(H1N1) outbreak: A teen-aged
school girl anda45-year-old man succumbed, as more
schools closed to try to stem the spread of the disease.
ya Kaewparadai က ပြောပါတယ်။ တခြားသေဆုံးသူတဦးကတော့ အသက် ၄၅ နှစ်ရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်က Rajvithi ဆေးရုံမှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ သေတာပါ။ ဆေးလိပ်နဲ့အရက်အလွန်အကျွံသောက်တော့ ဒီလူနာဟာ သေတွင်းအန္တရာယ် ပိုနီးပါတယ်။ စနေနေ့ကတည်းက သူ့အခြေအနေက အတော်ဆိုးနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားမှာတော့ တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် လူနာ ၂၆ ယောက်သေအပြီးမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Graciela Ocana ဟာ တနေ့ တုန်းက နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ တောင်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေထဲမှာ အများဆုံး သေဆုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။
A (H1N1) ဗိုင်းရပ်ပိုးတုပ်ကွေးဖြစ်လို့သေတာဟာ ရှောင်လို့မရဘူးဆိုတာကို အစောကြီးကတည်းက ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရာသီမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ တုပ်ကွေးထက်ကို သေနှုန်း နည်းနေပါသေးတယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေ၊ ၆၅ နှစ်ကျော်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေဟာ A(H1N1) တုပ်ကွေးနဲ့ ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ရင် အန္တရာယ် ပိုများပါတယ်။
ကူးစက်ပိုးတွေ့တယ်ဆိုတာ အတည်ပြုစစ်ဆေးတွေ့ရှိအပြီးမှာတော့ နောက်တပါတ်ကြာသာပတေးနေ့အထိ ကျောင်းပိတ်ထားမယ်လို့ ဘင်ဂျမာမဟာရတ်ကျောင်းက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ကျောင်း ၄ ကျောင်းလည်း အတန်းတွေ ရပ်ထား ဖို့နဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို နာလန်ပြန်ထူလာတဲ့အထိ ရက်ရှည်ခွင့်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒီကေဘီအေ အင်အား ၂၀ ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ၀င်လာသဖြင့် ဒုက္ခသည်များ ထိတ်လန့်
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော်(ဒီကေဘီအေ) အင်အား ၂၀ ခန့်သည် ယမန်နေ့ညတွင် ထိုင်းနယ် မြေတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခံထားရသည့် မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေကြရသည်။
ယခုဇွန်လ၂၆ ရက်နေ့ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်တစု၏ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒီကေဘီအေဘက်မှ တပ်ရင်း(၇) တပ်ရင်းမှူးအပါအ၀င် ၈ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုကို မကျေနပ်သဖြင့် မယ်လစခန်းကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရသည့် သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ယင်းသတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ယမန်နေ့ညက ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည် ဆိုသောကြောင့် ဒုက္ခသည်များ ပိုမိုစိုးရိမ်နေကြသည်ဟု ဒုက္ခသည် တဦးက ပြောသည်။
“သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီး သေတယ်ဆိုတော့ သူတို့ မကျေနပ်ဘူး။ သူတို့ မယ်လ စခန်း ထဲဝင်မယ်ကြားတယ်။ အဲဒါ အားလုံးသတိနဲ့ နေနေကြတာပေါ့။ ထွက်ပြေးလို့တော့မရပါဘူး။ ကလေး တွေ တပြုံကြီး လူကြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အများကြီး။ ဘယ်ဘက်က၀င်မလဲ သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ တ ထိတ်ထိတ်တလန့်လန့် ကြောက်တတ်တဲ့ လူဆို အိပ်လို့မရဘူးပေါ့။ သူတို့လာလဲ ဘာတခုမှ ရမှာ မဟုတ်ဘူး လူထုတွေပဲ အချောင် သေရမယ်။”
လက်ရှိ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းကို လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထားပြီိး ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုများကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ပြုလုပ်ထားသည်ဟု စခန်းကော်မတီ ဒု -ဥက္ကဌ မန်းထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
“ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း သူတို့လဲ ကေအန်ယူလုပ်တယ်။ ဒုက္ခသည် စခန်းကာကွယ်ရေးလုပ်တယ်။ အဲလို ထင် တာ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့။ အဲဒါသူတို့ဒေါသလည်းထွက်မယ် စိတ်ဆိုးတော့ ပြောတာလည်း ရှိမှာပေါ့။ ဒီ လောက်တောင်ဖြစ်တာ ဒုက္ခသည်စခန်း အကုန်လုံး မြန်မာပြည် ပြန်မောင်းပြန် မယ်ဆိုတဲ့ အဲပုံစံမျိုး သူတို့ပြောတာရှိတာပေါ့။ တကယ့် တကယ်က ဘာလှုပ်ရှားမှုမှ မတွေ့ရဘူး။ နှောက်ယှက်မယ့် အနေ အထားလဲ မတွေ့ရပါဘူး”
ဒီကေဘီအေ တပ်အဖွဲ့အနေဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်းအား ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု မန်းထွန်းထွန်းက သုံးသပ်သည်။
“နိုင်ငံတကာရဲ့ ကာကွယ်မှု အောက်မှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ စခန်းကို သူတို့ဝင်ရောက် နှောက်ယှက်ဖို့ မ ထင်ဘူးလေ။ ဘာလို့လဲဆို တစုံတရာ ဖြစ်မယ်ဆို သူတို့ထိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေး အကြီးအကျယ် ထိခိုက် သွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလဲ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ သူတို့ရဲ့ image ကလုံးဝ အားမကောင်းတော့ဘူးလေ။ တဘက်ကလဲ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုတွေကလည်း နေတာပဲ။ ဒုက္ခရောက်ရင် အကုန်လက်ခံတာပဲ။ ဆိုတော့ သူတို့ကလဲ မလုပ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့က ထင်တယ် လေ”
ဒုက္ခသည်စခန်းအုပ်ချုပ်ရေး ထိုင်းဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း များကို ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံရေးအတွက် အကောင်းဆုံးတာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်ပေးရန် အကူအညီ တောင်းခံထားသည်ဟု သိရသည်။
မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းရှိ မြန်မာများ ဆန္ဒပြမှုဖြစ်
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားသားများအား ထိန်းသိမ်းထားသည့် စမုံညှင်းစခန်း အတွင်း၌ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ ယမန်နေ့ညက ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အာဏာပိုင်က အကြမ်းနည်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း သည်ဟု သိရသည်။
စခန်းတွင်း ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားပုံနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားရှိ မြန်မာအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ပေးရေး ကော်မတီ (BWRPC) မှ ကိုကျော်ထူးအောင်က ယခုလို ပြောသည်။
“ဟိုတနေ့က သူတို့ Camp ထဲမှာ နေမကောင်းတဲ့သူတွေကို ဆေးခန်းသွားပို့ဖို့ စာရင်း တင်လိုက် တယ်။ တင်လိုက်တဲ့အထဲမှာ ဗမာနှစ်ယောက်က ပိုသွားတယ်။ ပိုသွားတဲ့ နှစ်ယောက်ကို ထောင်အာ ဏာပိုင်တွေက ဆေးခန်းလည်းမပြပေးဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီ နှစ်ယောက်ကို အခန်းတံခါးပိတ်ပြီးတော့ ရိုက်တယ်။ ဆေးလိပ်မီးနဲ့တို့တယ်။ အဲဒါကို ကျန်တဲ့ ဗမာတွေက မကျေနပ်ဘူး။ မကျေနပ်တော့ ကျန် တဲ့ ဗမာတွေက မနေ့ကတုန်းက သူတို့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တန်းစီတာတို့ဘာတို့ မလုပ်ပဲ ဆန္ဒပြတယ်။”
ထိုကဲ့သို့ဆန္ဒပြမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အယောက်သုံးဆယ်ခန့်အား ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံး UNHCR မှ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်ဟုဆိုကာ စခန်းအာဏာပိုင်များက ခေါ်ထုတ်၍ ရိုက်နှက်ပြီး အ ဆောင်ပြောင်းလိုက်သည့်အတွက် အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားစဉ် စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် ပြည်သူ့စစ်အင်အား ၃၀၀ ခန့်ရောက်ရှိလာပြီး သေနတ် နှင့် မျက်ရည်ယိုဗုံး များ ပစ်ဖောက်ကာ လူစုခွဲလိုက်သည်ဟုသိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများနှင့် အဆောင်တွင်းမှခေါ်ထုတ်၍ ရိုက်နှက်ခံရသူ အယောက်သုံးဆယ် အနက် ဒဏ်ရာပြင်းထန် သူများရှိသော်လည်း စခန်းတွင်း၌သာ ဆေးကုသပေးပြီး ယခုနောက်ဆုံးအခြေအနေ အရ ပြန်လည်ငြိမ်သက်နေသည်ဟု သိရသည်။
စခန်းတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကတော့ နေမကောင်းတဲ့ သူတွေ ဆေးခန်းပြခွင့်ရှိတယ်။ ဆေးခန်းမှာဆရာဝန်က နည်းနည်းပါးပါးစစ်ပြီး တော့ ကျန်တဲ့ဆေး ဘာဆေးမှမပေးဘူး။ ကိုက်ခဲရင်သောက်တဲ့ ဖယ်နယ်ဒေါ ဆိုတဲ့ဆေးတမျိုးပဲ ပေးတယ်။ ချောင်းဆိုး လည်း ဒီဆေးပဲ၊ ဖျားလည်းဒီဆေးပဲပေးတယ်။” ဟု ကိုကျော်ထူးအောင် ကပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ဖမ်းဆီးမိပါက အာဏာပိုင်များမှ ဥပ ဒေ အရ အပြစ်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် မပို့ဆောင်မီ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများ၌ ဆက်လက် ချုပ်နှောင် ထားရှိသည်။
စမုံညှင်းစခန်းအတွင်း၌ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား နှစ်ထောင်ခန့်ရှိသည့်အနက် မြန်မာ နိုင်ငံသား ထက်ဝက် ကျော်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးနှင့် ဘန်ကီမွန်း တွေ့ဆုံမည်
ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းဟာ မနက်ဖြန်စတင်မဲ့ ၂ ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ တွေ့ဆုံမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးစိုးမြင့်နဲ့ ဦးညွန့်ဝေတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေးအပါအဝင် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုထားတဲ့အချက် ၃ ချက်ကို အခြေခံ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ 'အခု မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက သူပြောတဲ့ အချက် သုံးချက်၊ နော် ဒီအချက် သုံးချက်ကို CEC အနေနဲ့လည်း ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူတယ်၊ ဒီအချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ နောက် ဒီ့ပြင်ဟာတော့ အသေးစိတ် သွားမှာပေါ့။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်အနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ ခရီးစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လေ့လာသူတွေက ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ အန်အယ်ဒီပါတီကတော့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဦးဉာဏ်ဝင်း။ ။ 'က္ဆွန်တော်တို့ ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ ဒီတခေါက်ထဲမှာ ဘာမှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ သို့သော်၊ အဲဒီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လမ်းပွင့်နိုင်တယ်လို့တော့ ယူဆတယ်။'
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းဟာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ အခုအချိန်အထိတော့ အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့ကြီးကတော့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းဟာ သူရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်ထောင်ကနေ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အဖြစ် ပြန်ပို့မဲ့ရလာဒ်မျိုးကို တိုးတက်မှုအဖြစ် လက်မခံသင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အဖြစ်ပြန်အပို့ခံရမယ်ဆိုရင် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီစဉ်ဟာ အကြီးအကျယ် ရှုံးနိမ့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ထောက်ပြထားပါတယ်။ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ ဘဝကနေ ကင်းလွတ်အောင် အခွင့်အရေးပေး ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ မလိုအပ်ပဲ အချိန်ဆွဲပြီး နိုင်ငံရေးကစားနေတာတွေကို ရပ်တံ့ပြီး တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမဲ့ ကာလရောက်ပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောရမဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး Kenneth Roth က ပြောပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရ
ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်နေကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမှာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ ချိုးဖောက်ခံနေရတာ ရှိကြောင်း၊ ဥပဒေဆိုတာရှိပေမဲ့ ဥပဒေအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုတယ်လို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်း အစိုးရ(NCUGB)ရဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက ဗန်ကောက်မြို့မှာ ဇူလိုင် ၂ရက် ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဦးခွန်မြင့်ထွန်း။ ။ 'အလုပ်ရှင်တွေကလဲပဲ အလုပ်သမားရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်သလို သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေ အပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်တယ်။ ဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ အဲဒီဥပဒေတွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းရင် ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေကရော အလုပ်ရှင်တွေကရော ဥပဒေပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။'
ထိုင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အိမ်တွင်းအကူအလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး တက်ရောက်နေတဲ့ ဦးခွန်မြင့်ထွန်းက အဲဒီလိုပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ အိုင်အယ်လ်အို (ILO) က လာမဲ့ ၂ဝ၁ဝ မှာ နိုင်ငံတကာ အိမ်တွင်း အကူအလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံအလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အချက်တွေကို ဥပဒေပြု ပြဌာန်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ တိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဂျာမန်အလုပ်သမားဖောင်ဒေးရှင်း FES (Friedrith Ebert Stistung)တို့က ဒီဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကို ကမကထလုပ် ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တွင်း အလုပ်သမားတွေအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ အများစု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရမှုတွေကို အလေးပေးပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အိမ်တွင်းအကူအလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အန္ဈရာယ်ကြီးမားပုံကိုလည်း အခုလို ထောက်ပြပါသေးတယ်။
ဦးခွန်မြင့်ထွန်း။ ။ 'အိမ်တွင်းအကူအလုပ်သမားတွေဆိုတာက အခြားသော အလုပ်သမားတွေနဲ့မတူတဲ့ သဘာဝရှိတယ် သူတို့မှာ သမဂ္ဂလို ဖွဲ့စည်း လူပ်ရှားနိုင်တာ မရှိဘူး တဦးတယောက်တည်းပဲ သက်ဆိုင်ရာ အိမ်တွေမှာ သွားလုပ်ရတယ်။ သီးခြား အထီးကျန် ဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်လုပ်ရာမှာလည်း အလုပ်ချိန် သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။ အကုန်လုံးကို သိမ်းကျုံးလုပ်ရတယ် လုပ်ခလစာနည်းတယ်။ ပြီးရင် အိမ်ထဲမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရမှု အပါအဝင် ဘဝ လုံခြုံမှုကလဲ အင်မတန်နည်းတယ်။'
NCGUB ရဲ့ ဒုက္ခသည်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာဌာန တာဝန်ခံ ဦးသက်ခိုင်ကလည်း အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ဥပဒေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိစေဖို့နဲ့ ဘယ်လို အကာကွယ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာ နားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြား တက်ရောက်လာကြတဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လက်ရှိကိုယ်တိုင် အိမ်တွင်းအကူ အလုပ်သမားအဖြစ် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေက ဒေသတွင်းမှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးမှာ ထိုင်းအစိုးရဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ထိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂ သန်းနီးပါး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ခန္ဈီးထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ငှက်ဖျားဒဏ်ခံနေရ
မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္ဈီးထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အတော်များများ ငှက်ဖျားရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ခန္ဈီးအကျဉ်းထောင်မှာ ရှိတဲ့ သားဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းဝေကို မကြာခင်က ထောင်ဝင်စာတွေ့ခဲ့ပြီး မနေ့က ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးတင်လှက ခန္ဈီးထောင်တွင်း အကျဉ်းသားတွေ ငှက်ဖျားရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ အခြေအနေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
ဦးတင်လှ။ ။ 'ရန်ကုန်က ရောက်လာတဲ့ လူငယ်အားလုံးက အဖေတဲ့ အားလုံးငှက်ဖျား ရောဂါတွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ သားလည်းပဲ အခု ငှက်ဖျားဖြစ်နေတယ်၊ တခန်းတည်းအတူနေတဲ့ နေမင်းစိုးဆိုတဲ့ ကလေးလေးကလည်း ဘိုကလေးကပေါ့၊ အဲဒီ ကလေးလေးကလည်း ဖျားနေတယ်၊ နောက်တခါ ဒီငြိမ်းလင်းဆိုတဲ့ ရန်ကုန်က ကျောင်းသားလေးလည်း ဖျားတာ ၅ လလောက် ရှိပြီ၊ သူတို့သုံးနေရတာ စမ်းရေကို သုံးနေရတယ်တဲ့၊ ငှက်ဖျားမမိတဲ့သူ တယောက်မှ မရှိဘူး ခု။'
ယခုလက်ရှိ ခန္ဈီးထောင်တွင်း ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ အပေါ် တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုမျိုးမင်းဝေရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကပဲ အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
ဦးတင်လှ။ ။ 'သားကတော့ပြောတယ်လေ၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးကတော့ တလတကြိမ် လာပြီးတော့ စစ်ဆေးတယ်တဲ့၊ စစ်ဆေးပေမဲ့ အခုဖျားနေတော့ အဖျားတက်လိုက် ကျသွားလိုက်နဲ့ အဲလိုဖြစ်နေတယ်၊ သူတို့ဆီက လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကလည်း စုံစုံလင်လင် မရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတယ် ကျနော် ထောင်ပိုင်တွေကိုလည်း ပြောတော့ သူတို့ကတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲခင်ဗျ၊ ဒီလိုပါပဲ ဖျားလိုက်ကျလိုက် ဒီလိုပဲနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ မိဘတွေကတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဗျာ။'
အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင် ကိုမျိုးမင်းဝေကို ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် ၉ရပ်ကွက်က နေအိမ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့က လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီး အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးက တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု ပုဒ်မနဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့မှာ ထောင်ဒဏ် ၅နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး ခန္ဈီးထောင်ကို ပြောင်းပို့တာ ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမျိုးမင်းဝေဟာ ဒေသတွင်းက လူ့အခွင့်အရေး၊ ကလေးစစ်သားနဲ့ အဓမ္မ လုပ်အားခိုင်းစေမှု ပပျောက်ရေး ကိစ္စတွေ အတွက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အင်းစိန်ထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံနေရစဉ်ကတည်းက အတွင်းလိပ်ခေါင်းရောဂါဝေဒနာခံစားနေရပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ကုသခွင့်ရဖို့ မိဘဖြစ်သူတွေ ကြိုးစားနေစဉ်မှာ ခန္ဈီးထောင်ကိုပြောင်းရွေ့လိုက်တာပါ။ ခုတော့ ငှက်ဖျားကော လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဝေဒနာပါ နှစ်မျိုးခံစားနေရပါတယ်။
ခန္ဈီးထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၁၅နှစ် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ၂ဝဝ၇ မျိုးဆက်သစ် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဒီငြိမ်းလင်းအပါအဝင် သားဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းဝေနဲ့ ကိုနေမင်းစိုးတို့ဟာ ငယ်ရွယ်သူတွေ ဖြစ်ကြတာကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ သက်သက်ညှာညှာ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။
ဦးတင်လှ။ ။ 'ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် အသီးအပွင်လေးတွေကို ကျနော်တို့ အာဏာပိုင်တွေက ဒါ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ထင်တယ်လေ၊ ဒီလက်ရှိ အစိုးရအနေနဲ့ သဘောထားကို နားလည်မယ်ဆိုရင် လာမယ်အနာဂတ်ကြီးရဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကို ပြုမဲ့ ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သက်ညှာညှာနဲ့ ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။'
အခု ငှက်ဖျားရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရသူ အားလုံးလိုလို အစားအသောက်ပါ ပျက်ပြီး တော်တော်ကို အခြေအနေဆိုးနေတယ်လို့လည်း ဆက်ပြောပါတယ်။ ခန္ဈီးထောင်ကို သွားပြီး ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ကျတော့လည်း မိုးတွင်းကာလ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစရိတ် ကြီးတာကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ မိဘတွေ အနေနဲ့ နှစ်လမှ တကြိမ်သာ တွေ့နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်လွတ်ရေး အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ ရောက်တဲ့အခါ အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ပြန်လွတ်ရေးကိစ္စကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကမႝာတလွှားမှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင်တွေအပါအဝင် အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် စုစုပေါင်း၆ဝကျော်က 64forSuu.org အင်တာနက် စာမျက်နှာက တဆင့် ဇူလိုင်၂ရက် ဒီကနေ့မှာ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Burma Campaign UK အဖွဲ့တာဝန်ခံ Mark Farmaner ရှင်းပြတာက နိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင်တွေ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန်ပြန်လွတ်ဖို့ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးရေးကို တောင်းဆိုလိုက်ကြတာပါ။ အဲဒီလိုထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ Jody Williams နဲ့ Wangaari Mathai လို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင်တွေ ပါသလို ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Christine Lagarde / ဂရိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dora Bakoyannis တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေထဲက အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေလည်း စုပေါင်း ပါဝင်တောင်းဆိုကြကြောင်း Mark Farmaner ပြောဆိုပါတယ် ။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေက 64forSuu.org အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းစကားထဲမှာတော့ သူတို့တွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူရှိနေကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်မလွတ်မချင်း ဆက်လက် လှုပ်ရှား တောင်းဆိုသွားကြမဲ့အကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
64forSuu.org ဆိုတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုသူ စုစုပေါင်း ၁၆ဝဝဝ ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ် ။
အဆိုပါ 64forSuu.orgဆိုတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို မေလ၂၆ရက်နေ့က စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗွီဒီယိုသတင်းစကား အပါအဝင် စာရေးသားတောင်းဆိုမှုတွေ ဓာတ်ပုံနဲ့ သတင်းစကားပေးပို့ ဖော်ပြတာတွေရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။